1there Book reMakoronike – 2hove
musha / Bhaibheri / Old Testament / 1there Book reMakoronike
1:2 waKainani, Maharareri, Jared,
1:3 Enoch, Metusera, Rameki,
1:4 Noah, Shemu, hamu, naJafeti.
1:5 Vanakomana vaJafeti: naGomeri, naMagogi, naMadhai, uye neJavhani, Tubhari, Mesheki, rinoparadza.
1:6 Uye vanakomana naGomeri: Ashikenazi, Rifati, naTogama.
1:7 Vanakomana vaJavhani: Erisha naTarishishi, NaKitimi naRodhanimi.
1:8 Vanakomana vaHamu: Kushi, naMiziraimu, uye Isa, uye Kenani.
1:9 Vanakomana vaKushi: pachake, naHavhira, Sbth, naRama, naSabhiteka. Vanakomana vaRama: Shebha Dadan.
1:10 Ipapo Kushi pamuviri vaNimurodhi, uye akatanga kuva simba pamusoro penyika.
1:11 Zvirokwazvo, Miziraimi pamuviri vavaRudhi, nevaAnami, uye vaRehabhi, nevaNafituhimu,
1:12 uyewo nevaPaturusi nevaKasiruhi: kubva izvi vaFiristia uye navaKafitori wakabuda.
1:13 Zvirokwazvo, Kenani pamuviri Sidhoni, dangwe rake, uyewo muHiti,
1:14 navaJebhusi, navaAmori, navaGirigashi,
1:15 navaHivhi, uye muAriki, vaAriki,
1:16 uyewo Arvadian, uye Samarite, nevaHamati.
1:17 Vanakomana vaShemu: Eramu, naAshuri, uye Aripakishadhi, neRudhi, uye Aram, Uzi, naHuri, Geteri, naMesheki.
1:18 Ipapo Aripakishadhi pamuviri Shera, Iyewo pachake pamuviri Ebheru.
1:19 Uye kuna Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri. Zita reumwe raiva Peregi,, nekuti pamazuva ake nyika yakakamurwa. Uye zita remunin'ina wake raiva Jokitani.
1:20 Ipapo Jokitani pamuviri vaArimodhadhi, naSherefi, naHazarimavheti, Jera,
1:21 uyewo Hadhorami, Uzari, Dhikira,
1:22 uye zvadaro Dhikira, uye Abimael, Shebha, chaizvo
1:23 uyewo Ofiri, naHavhira, Jobhabhu. Vose ava vaiva vanakomana vaJokitani.
1:24 Shemu, Aripakishadhi, Shera,
1:25 Ebheru, Peregi, imbwa,
1:26 Serug, Nahori, Tera,
1:27 Abhuramu, ndiye Abraham.
1:28 Uye vanakomana vaAbrahamu: Isaka naIshimaeri.
1:29 Uye awa mazera avo: dangwe raIshumaeri, Nebhayoti, uye naKedhari, uye Adhibheeri, naMibhisami,
1:30 uye naMishima, Dhuma, Pulp, Hadhadhi, uye Tema,
1:31 Jeturi, Nfis, naKedhema. Ava ndivo vaiva vanakomana vaIshumaeri.
1:32 Vanakomana zvaKetura, murongo Abraham, uyo pamuviri: Zimurami, vaJokishani, mamiriro enzvimbo, vaMidhiani, naIshibhaki, naShua. Vanakomana vaJokishani: Shebha neDhedhani. Zvino vanakomana vaDhedhani: Asshurim, uye Letushim, nevaRetushi nevaReumi.
1:33 Vanakomana vaMidhiani: efa, Eferi, uye Hanoki, Abhidha, naEridha. Vose ava vaiva vanakomana vaKetura.
1:34 Zvino Abhurahamu pamuviri Isaac, ane vanakomana vaiva Esau uye Israel.
1:35 Vanakomana vaEsau: Erifazi, Rueri, Jeushi, Jaramu, naKora.
1:36 Vanakomana vaErifazi: shamwari, Omar, Zefo, naGatamu, Kenez, uye Timna, Amareki.
1:37 Vanakomana vaReueri: Nahati, Zera, Shama, naMiza.
1:38 Vanakomana vaSeiri: Rotani, Shobhari, waZibhioni, Ana, Dhishoni, churu, naDhishani.
1:39 Vanakomana vaRotani: kuti, Hemani. Zvino hanzvadzi yaRotani aiva Timuna.
1:40 Vanakomana vaShobhari: mumwe, Manahati, naEbhari, Kshefi, naOnamu. Vanakomana vaZibheoni: Aja naAna. Vanakomana vaAna: Dhishoni.
1:41 Vanakomana vaDhishoni: Hamurani, uye Esheban, uye Itirani, naKerani.
1:42 Vanakomana vaEzeri: Bhirihani, naZaavhani, uye Will. Vanakomana vaDhishani: Uzi naArani.
1:43 Zvino aya ndiwo madzimambo akatonga munyika yeEdhomu, asati paiva namambo pamusoro pavanakomana vaIsraeri: akanaka, mwanakomana waBheori; uye zita reguta rake raiva Dhinihabha.
1:44 Zvino Bhera wakafa, Jobhabhu, mwanakomana waZera, kubva kuBhozira, paushe.
1:45 Jobhabhu akanga afa, Hushamu, kubva kunyika yevaTemani, paushe.
1:46 Ipapo Hushamu zvakare zvapfuura, Hadhadhi, mwanakomana waBhedhadhi, paushe. Akarova Midhiani munyika yaMoabhu. Zita reguta rake rainzi Avhiti.
1:47 Zvino Hadhadhi akanga afa, Samura kubva weMasereka akatonga pachinzvimbo chake.
1:48 Ipapo Samura akafawo, Shauri aibva kuRehobhoti, iro riri pedyo norwizi, paushe.
1:49 Shauri zvakare takafa, Child dzevanhu, mwanakomana waAkibhori, paushe.
1:50 Iyewo akabva afa, Hadhari akatonga pachinzvimbo chake. Uye zita reguta rake rainzi Pau. Uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri, mwanasikana waMatiredhi, mwanasikana waMezahabhi.
1:51 Hadhari wakati afa, ipapo akatanga kuva vatungamiri paEdhomu panzvimbo madzimambo: mutungamiri Thamna, mutungamiri Arivha, mutungamiri Jeteti,
1:52 mutungamiri naOhoribhama, mutungamiri Era, mutungamiri Pinon,
1:53 kutonga Kanez, mutungamiri Friend, mutungamiri Mibhizari,
1:54 mutungamiri Magidhieri, mukuru hasha. Ava vatungamiri eEdhomu.
2:1 Uye vanakomana vaIsraeri: Reuben, Simeon, Levi, Judha, Isakari, naZebhuruni,
2:2 uye, Joseph, Benjamin, Nafutari, Gadhi, uye Asheri.
2:3 Vanakomana vaJudha: ndizvo, Onani, uye Shera. Ava vatatu vaakaberekerwa kubva mwanasikana Shua, vaKanani. asi Is, dangwe raJudha, zvakaipa pamberi paJehovha, uye saka akamuuraya.
2:4 zvino Tamari, muroora wake, akamuberekera Perezi naZera. saka, Vanakomana vose vaJudha vaiva vashanu.
2:5 Vanakomana vaPerezi: Hezironi naHamuri.
2:6 wo, Vanakomana vaZera: Zimri, naEtani, naHemani, uyewo Karikori naDhara, shanu zvachose.
2:7 Vanakomana vaKarimi: wana, uyo anetseka Israeri uye vakatadzira ne kuba chii yakanyangadza.
2:8 Vanakomana vaEtani: Azaria.
2:9 Vanakomana vaHezironi uyo vaakaberekerwa: Jerameeri, uye Ram, naKerubhai.
2:10 Ipapo Ram pamuviri Aminadhabhi. Uye Aminadhabhi mimba Nashoni, mutungamiriri wevanakomana vaJudha.
2:11 wo, Nashoni pamuviri Salma, kubva uyo Bhoazi akasimuka.
2:12 Zvirokwazvo, Bhoazi akabereka Obhedhi, Iyewo pachake pamuviri Jesse.
2:13 Zvino Jese pamuviri wedangwe Eriabhi, wechipiri Abhinadhabhi, wechitatu Shama,
2:14 ari naNetaneri wechina, wechishanu naRadhai,
2:15 wechitanhatu naOzemi, wechinomwe David.
2:16 Hanzvadzi dzavo dzaiva Zeruya naAbhigairi. Vanakomana vaZeruya: Abhishai, Joabhu, naAsaheri, tatu.
2:17 Abhigairi mimba Amasa, baba vake vaiva Jeteri, muIshumaeri.
2:18 Zvirokwazvo, Caleb, mwanakomana waHezironi, akatora mukadzi anonzi Azubha, waakati pamuviri naJerioti. Uye vanakomana vake vaiva Jesheri, naShobhabhu, naAridhoni.
2:19 Azubha akanga afa, Karebhu akawana mukadzi Ephratha, uyo akamuberekera Huri.
2:20 Zvino Huri pamuviri waUri. Uye Uri mimba Bhezareri.
2:21 uye pashure, Hezironi akapinda kumukunda waMakiri, baba vaGiriyadhi. Iye akamutora paakanga ava namakore makumi matanhatu. Uye iye akamuberekera Segubhi.
2:22 Zvino Segubhi pamuviri Jairi, iye nevakange maguta makumi maviri namatatu panyika yeGiriyadhi.
2:23 Yakabata Geshuri naAramu, misha yaJairi, uye neKenati nemisha yaro, maguta makumi matanhatu. Vose ava vaiva vanakomana vaMakiri, baba vaGiriyadhi.
2:24 ndokubva, apo Hezironi akanga afa, Caleb akapinda kuna Ephratha. wo, Hezironi akanga ave mudzimai Abhija, uyo akamuberekera Ashuri, baba vaTekoa.
2:25 Zvino vanakomana vakaberekerwa Jerameeri, dangwe waHezironi: gondohwe, dangwe rake, naBhuna, naOreni, uye naOzemi, Ahija.
2:26 Jerameeri zvakare akaroora mumwe mukadzi, ainzi Atara, akanga ari mai vaOnami.
2:27 Zvadaro zvakare, vanakomana Ram, wedangwe waJerameeri, Maazi, Ground, naEkeri.
2:28 NaOnamu vanakomana: Shamai naJadha. Vanakomana vaShamai: Nadhabhi naAbhishuri.
2:29 Zvirokwazvo, Zita romukadzi waAbhishuri raiva Abhihairi, uyo akamuberekera Abhani naMoridhi.
2:30 Zvino Vanakomana vaNadhabhi vaiva Seredhi naApaimi. Seredhi akafa asina vana.
2:31 Zvirokwazvo, mwanakomana vaApaimi akanga Ishi. Uye Ishi mimba Sheshani. Zvino Sheshani pamuviri Arai.
2:32 Asi Vanakomana vaJadha, munun'una waShamai, vaiva Jeteri naJonatani. Ipapo Jeteri akafawo asina vana.
2:33 Uye Jonatani mimba Pereti naZaza. Ndivo vanakomana vaJerameeri.
2:34 Zvino Sheshani akanga asina vanakomana, asi vanasikana chete, uye muranda muEgipita ainzi Jara.
2:35 Naizvozvo akamupa mwanasikana wake kuti ave mukadzi, uyo akamuberekera Atai.
2:36 Ipapo Atai pamuviri Nathan, Natani mimba Zabhadhi.
2:37 wo, Zabhadhi pamuviri Efirari, Efirari mimba Obhedhi.
2:38 Obed pamuviri Jehu; Jehu pamuviri Azaria.
2:39 Azaria pamuviri Herezi, Herezi mimba Ereasa.
2:40 Ereasa pamuviri Sisimai; Sisimai pamuviri Sharumi.
2:41 Sharumi pamuviri Jekamiya; ipapo Jekamia pamuviri Erishama.
2:42 Vanakomana vaKarebhu, munin'ina waJerameeri, vaiva Mesha, dangwe rake, uyo aiva baba vaZifi, uye vanakomana Mesha, baba vaHebhuroni.
2:43 Zvino Vanakomana vaHebhuroni vaiva Kora, uye Tapuah, naRekemu, uye Shema.
2:44 Ipapo Shema pamuviri vaRahamu, baba vaJorikeami. Rekemi mimba vaShamai.
2:45 Mwanakomana waShamai akanga ari Maoni, Maoni akanga ari baba vaBhetizuri.
2:46 Now Efa, murongo waKarebhu, bhowa Harani, uye Moza, naGazezi. Uye Harani mimba Gazezi.
2:47 Vanakomana vaJadha: mambo, Jotamu, naGeshani, naPereti, neEfa, uye Shaafi.
2:48 naMaaka, murongo waKarebhu, akaberekera Shebheri naTirihana.
2:49 Ipapo Shaafi, baba vaMadhimana, pamuviri Sheva, baba vaMakibhena, uye nababa vaGibhiya. Zvirokwazvo, mukunda waKarebhu akanga ari Akisa.
2:50 Ndivo vanakomana vaKarebhu, mwanakomana waHuri, dangwe Ephratha: Shobhari, baba vaKiriati-jearimi;
2:51 Salma, baba vaBheterehemu; ः aref, baba vaBhetigadheri.
2:52 Zvino paiva navanakomana vaShobhari, baba vaKiriati-jearimi, uyo akaona hafu nzvimbo yokuzorora.
2:53 Uye kubva hama vaKiriati-jearimi: Valtiri, uye navaPuti, uye navaShumati, navaMishirai. kubva izvi, ndiko kwakabva vaZorati navaEshitaori wakabuda.
2:54 Vanakomana vaSarima: Bethlehem, uye yavaNetofati, misoro yeimba Joabhu, uye hafu nzvimbo vamwe ndiko kwakabva vaZorati,
2:55 uyewo mhuri nevanyori vokuJabheshi, avo muchiimba nekuita mumhanzi, uye vanogara mumatende. Ndivo vaKeni, vakabuda Calor, baba veimba yaRekabhi.
3:1 Zvirokwazvo, David aiva nevanakomana ava, uyo vaakaberekerwa paHebhuroni: Wedangwe Amunoni, mwanakomana waAhinowami muJezereeri; wechipiri Dhanyeri, kubva waAbhigairi muKarimeri;
3:2 wechitatu Abhusaromu, mwanakomana waMaaka, mwanasikana waTarimai, mambo weGeshuri; kuti Adhonia chechina, mwanakomana waHagiti;
3:3 weshanu Shefatia, waAbhitari; wechitanhatu Itireami, kubva wake Egira.
3:4 saka, vatanhatu vakaberekerwa paHebhuroni, apo akatonga kwemakore manomwe nemwedzi mitanhatu. Ipapo akatonga kwemakore makumi matatu nematatu ari muJerusarema.
3:5 Zvino muJerusarema, Vanakomana vaakaberekerwa: Shamua, uye Sobab, uye Nathan, uye Soromoni, izvi zvina Bhatishebha, mukunda waAmieri;
3:6 uyewo naIbhari naErishama,
3:7 naErifereti, naNoga, naNefegi, naJafia,
3:8 Zvechokwadi, Erishama, Eriadha, naErifereti, pfumbamwe.
3:9 Ava vose vaiva vanakomana vaDhavhidhi, tisingabatanidzi vanakomana vevarongo. Uye vaiva hanzvadzi, Tamari.
3:10 Zvino mwanakomana waSoromoni aiva Rehobhoamu, kubva uyo Abhija pamuviri mwanakomana, saka. Uye kwaari, akaberekerwawo Jehoshafati,
3:11 baba Jehoramu. Uye Jehoramu mimba Ahazia, kubva uyo akaberekerwawo Jehoashi.
3:12 Uye mwanakomana wake, Amazia, pamuviri Azaria. Ipapo Jotamu, mwanakomana waAzaria,
3:13 pamuviri Ahazi, baba Hezekia, kubva kwakazvarwa Manase.
3:14 Zvadaro zvakare, Manase pamuviri Amoni, baba Josiah.
3:15 izvi Zvino vanakomana vaJosiya: Wedangwe Johwanani, wechipiri Jehoyakimu, wechitatu Zedhekia, wechina Sharumi.
3:16 From Jehoyakimi akaberekerwa vaJekonia uye Zedhekia.
3:17 Vanakomana vaJekonia renhapwa yaiva: Saratieri,
3:18 naMarikirami, Pedhaya, naShenazari, Jekamia, Hoshama, naNedhabhia.
3:19 From Pedhaya, ipapo Zerubhabheri naShimei. Zerubhabheri pamuviri Meshurami, Hanania, uye hanzvadzi yavo Sheromiti,
3:20 uyewo naHashubha, naOheri, naBherekia, naHasadhia, NaJushabhi-Hesedhi, shanu.
3:21 Zvino mwanakomana waHanania akanga Peratia, baba Jeshaya, ane mwanakomana wake akanga naRefaya. Uye mwanakomana wake waiva vaArinani, kubva kwakazvarwa Obadiah, ane mwanakomana wake akanga naShekania.
3:22 The mwanakomana waShekania akanga Shemaya, ane vanakomana vaiva izvi: Hatushi, uye Igari, naBharia, naNearia, naShafati, vatanhatu nhamba.
3:23 Vanakomana vaNearia: vaErioenai, uye Hizkiaj, naAzirikami, tatu.
3:24 Vanakomana vaErioenai: naHodhavhia, Eriashibhi, naPeraya, uye naAkubhi, naJohwanani, naDheraia, uye naAnani, nomwe.
4:1 Vanakomana vaJudha: Perez, Hezironi, naKarimi, uye sei, naShobhari.
4:2 Zvirokwazvo, Reaya, mwanakomana waShobhari, pamuviri Jahati; vakaberekwa Ahumai naRahadhi kwaari. Ava ndivo hama ndiko kwakabva vaZorati.
4:3 Uye ichi ndicho wemari vaEtami: Jezreeri, naIshima, naIdhibhashi. Uye zita rehanzvadzi yavo rakanga riri Hazereponi.
4:4 Zvino naPenueri baba vaGedhori, naEzeri baba vaHusha. Ndivo vana vaHuri, dangwe Ephratha, baba vaBheterehemu.
4:5 Zvirokwazvo, nokuti Ashuri, baba vaTekoa, kwaiva nevakadzi vaviri: Mazano uye kenza.
4:6 NaNaara akamuberekera: Ahuzami, naHeferi, naTemeni, naHaahashitari. Ava ndivo vanakomana vaNaara.
4:7 Vanakomana vaHera vaiva Zereti, naIshari, naEtinani.
4:8 Zvino waHakozi pamuviri Anubhi, naZobhebha, uye hama dzaAhareri, mwanakomana waHarumi.
4:9 Asi Jabhezi akanga vakakurumbira, kupfuura hama dzake, uye mai vake vakamutumidza zita rinonzi Jabhezi, vachiti, "Nokuti ini akamuberekera mukusuwa."
4:10 Zvirokwazvo, Jabhezi akadana kuna Mwari waIsiraeri, vachiti, "Kana chete, kana kuropafadza, muchandizadza ropafadzai, uye achaita kungozvinyengeterera miganhu yangu, uye ruoko rwako ruchava neni, uye imi achaita ini kwete vadzvinyirirwe zvakaipa. "Uye Mwari akapa kwaari zvinhu akanyengetera.
4:11 Now waKerubhi, munin'ina waShuha, pamuviri Mehiri, uyo aiva baba vaEshitoni.
4:12 Ipapo Eshitoni pamuviri Bhetirafa, naPasea, naTehina, baba guta waNahashi. Ndivo vana vaReka.
4:13 Zvino Vanakomana vaKenazi vaiva Otinieri naSeraya. Uye vanakomana vaOtineri vaiva Hatati uye Meonotai.
4:14 Meonotai pamuviri paOfura, asi naSeraya pamuviri Joabhu, baba pamupata navapfuri vesimbi. nokuti, paiva nyanzvi dzokugadzira ikoko.
4:15 Zvirokwazvo, vanakomana waKerubhi, mwanakomana waJefune, vaiva Iru, Era, naNaami. Uye vanakomana vaEra: Kenazi.
4:16 wo, vanakomana waJeharereri: Zifi naZifa, NaTiria naAsareri.
4:17 Vanakomana vaEzira: Jeteri, naMeredhi, Eferi, uye Jalon; uye akabereka Miriam, uye vaShamai, uye naIshabha, baba Eshitemoa.
4:18 Uye mukadzi wake, Judaia, akabereka Jeredhi, baba vaGedhori, Hebheri, baba vaSoko, naJekutieri, baba vaZanowa. Zvino kwaiva nevanakomana Bithiah, mwanasikana waFarao, uyo naMeredhi akaroora,
4:19 uye vanakomana vomukadzi waHodhia, hanzvadzi yaNahamu, baba vaKeira muGarimi, uye Eshtemoa, akanga achibva Maacathi.
4:20 Vanakomana vaShimoni: Amunoni, Rina, mwanakomana Hanan, naTironi. Vanakomana vaIshi: Zoheti naBhenizoheti.
4:21 Vanakomana vaShera, mwanakomana waJudha: ndizvo, baba vaReka, naRaadha, baba vaMaresha, uye hama yeimba navanoita wakaisvonaka mumba mhiko,
4:22 uye iye akaita kuti zuva rimire, uye varume Kunyepa, uye Kuchengeteka, NEAND, vaiva vatungamiri paMoabhu, vakadzokera kunyika nenguva iyo. Zvino mashoko aya ekare.
4:23 Ndivo vaumbi vaigara yecocoa uye Hedges, namambo mumabasa ake, uye vakanga vachigara imomo.
4:24 Vanakomana vaSimioni: Nemueri, naJamini, naJaribhi, Zera, naShauri;
4:25 Sharumi mwanakomana wake, Mibhisami mwanakomana wake, NaMishima mwanakomana wake.
4:26 Vanakomana vaMishima: Mwanakomana wake Haumueri, Zakuri mwanakomana wake, Shimei mwanakomana wake.
4:27 Vanakomana vaShimei vaiva gumi, uye pakanga nevanasikana vatanhatu. Asi hama dzake hadzina kuva nevanakomana vakawanda, uye yose hama haana akaenzana Verenga vanakomana vaJudha.
4:28 Zvino vakararama paBheerishebha, neMoradha, neMoradha,
4:29 uye muna Bhiriha, uye muna Ezemi, uye napaEzemi,
4:30 uye muna naBhetueri, uye vari Horima, uye paZikiragi,
4:31 uye paBheterehemu makabhoti, uye muna Hazarsusim, uye muna Bethbiri, uye muna Shaaraimu. Ndiwo aiva maguta avo kusvikira Dhavhidhi.
4:32 Uye maguta avo aiva Etamu, neAini, neRimoni, neTokeni, neAshani, maguta mashanu,
4:33 pamwechete nemisha yavo yose, kumativi ose maguta aya, kusvikira paBhaari. Ichi ugaro hwavo uye kuparadzira misha.
4:34 Uye pakanga NaMeshobhabhi naJamireki, naJosha, mwanakomana waAmazia,
4:35 uye Joel, uye Jehu, mwanakomana waJoshibhia, mwanakomana waSeraya, mwanakomana waAsieri,
4:36 uye Erioenai, naJaakobha, naJeshohaya, naAsaya, uye waAdhieri, uye naJeshimieri, uye Bhenaya,
4:37 uyewo Ziza, mwanakomana waShifi, mwanakomana waAroni, mwanakomana waJedheiya, mwanakomana waShimiri, mwanakomana waShemaya.
4:38 Aya mazita vatungamiri vavo pehama. Uye vakanga vakawanda kwazvo mukati dzimba michato yavo.
4:39 Zvino vakabva, kuitira kuti vapinde paGedhori, kusvikira kumabvazuva kwomupata, uye kuti vatsvake mafuro amakwai avo.
4:40 Vakawana mafuro mafuta akanaka kwazvo, uye yakafara chaizvo uye norunyararo uye inobereka nyika, umo vamwe ndiri vaHamu wakararama asati.
4:41 Naizvozvo, avo vane mazita akanyorwa pamusoro, wakabuda pamazuva aHezekia, mambo waJudha. Uye vakauraya vagari vakanga imomo pamwe kwavaigara. Ivo akadzipukuta kunze, kusvikira nhasi. Uye vakagara munzvimbo yavo, nekuti vakawana mafuro mafuta kwazvo ikoko.
4:42 wo, Vamwe vanakomana vaSimioni, varume mazana mashanu, vakaenda kugomo reSeiri, kuva sevatungamiri Peratia naNearia, naRefaia, naUzieri, Vanakomana vaIshi.
4:43 Uye vakauraya vasara vavaAmareki, avo vakanga kutizira, vakagarako panzvimbo pavo, kusvikira nhasi.
5:1 wo, kwaiva vanakomana vaRubheni, dangwe raIsraeri. nokuti, akanga ari dangwe rake, asi wakati kutyora mubhedha wababa vake, kodzero yake youdangwe hwakapiwa vanakomana vaJosefa, mwanakomana waIsraeri, uye haana vairatidza sezvo dangwe.
5:2 Uyezve, Judha, aiva mhare pakati pehama dzake, kubva kuvatungamiri ake unganidza dzichibuda, asi kodzero dangwe rakati vairatidza kuti Joseph.
5:3 Naizvozvo, Vanakomana vaRubheni, dangwe raIsraeri, vaiva Hanoki, naParu, NaHezironi, naKarimi.
5:4 Vanakomana vaJoeri: Shemaya mwanakomana wake, Gogi mwanakomana wake, Shimei mwanakomana wake,
5:5 Mika mwanakomana wake, NaReaya mwanakomana wake, Bhaari mwanakomana wake,
5:6 Agriculture Mwanakomana RAKE, uyo waTirigatipirineseri, mambo weAsiriya, vakatapwa, uye iye akanga ari mutungamiri kurudzi rwaRubheni.
5:7 Zvino hama dzake navose dzake, pavakanga rakaverengwa nemhuri dzavo, akanga sezvo vatungamiriri naJeyieri naZekariya.
5:8 zvino Bhera, mwanakomana waAzazi, mwanakomana waShema, mwanakomana waJoeri, vaigara Aroeri, kusvikira paNebho neBhaari-meoni.
5:9 Uye akagara ichayerera nharaunda, kusvikira kwerenje uye rwizi rwaYufratesi. nokuti, vakatora vazhinji mombe munyika yeGiriyadhi.
5:10 ndokubva, mumazuva aSauro, ivo vakarwa pamusoro vanaHagari uye akavauraya. Uye vakagara munzvimbo yavo, kwavaigara, munyika yose kuti anotsvaka kumabvazuva eGiriyadhi.
5:11 Zvirokwazvo, Vanakomana vaGadhi vakanga vagere munyika vakomana nharaunda kwavari, munyika yeBhashani, kusvikira paSareka:
5:12 Joel musoro, naShafani wechipiri, ipapo naJanai naShafati, paBhashani.
5:13 Zvirokwazvo, hama dzavo, maererano nedzimba dzavo nehama, vakanga: Michael, naMeshuramu, Shebha, naShebha, uye Jacan, uye Zia, Ebheru, nomwe.
5:14 Ndivo vanakomana vaAbhihairi, mwanakomana waHuri, mwanakomana waGiriyadhi, mwanakomana waGiriyadhi, mwanakomana waMikaeri, mwanakomana waJeshishai, mwanakomana waJadho, mwanakomana waBhuzi,
5:15 pamwe nehama dzavo, vanakomana waAbhidhieri, mwanakomana waGuni, mutungamiriri weimba, mumhuri dzavo,
5:16 Uye vaigara paGiriyadhi, uye paBhashani nemisha yaro, uye zvose Mafuro Sharon, kusvikira kumiganhu.
5:17 izvi zvose vakaverengwa pamazuva aJotamu, mambo waJudha, uye namazuva aJerobhoami, mambo waIsraeri:
5:18 Vanakomana vaRubheni, uye vaGadhi, uye imwe hafu yorudzi rwaManase, varume vehondo, akatakura nhoo minondo, uye vaikunga uta, uye vakadzidziswa hondo, zviuru zvina makumi manomwe namakumi matanhatu, mberi kusvikira hondo.
5:19 Pavaitamburira pamusoro vanaHagari, asi zvirokwazvo Jetureans, naNafishi, naHobhabhi akapa rubatsiro kwavari.
5:20 Zvino vanaHagari vakanga mumaoko avo, uye vose vaiva navo. Nekuti vakadana kuna Mwari apo vakaita hondo. Iye akateerera kwavari, nekuti vakanga vachivimba naye.
5:21 Uye vakabata zvose zvavainazvo, yengamera zviuru makumi mashanu, namakwai maviri namazana mashanu, uye nembongoro zviuru zviviri, navanhu vane zviuru zvine zana upenyu.
5:22 Uye vazhinji vakawira pasi vaurawa. Nokuti kwaiva hondo Jehovha. Uye vakagara munzvimbo yavo, kusvikira tama.
5:23 wo, vanakomana mumwe hafu yorudzi rwaManase nyika, kubva kumativi paBhashani kusvikira paBhaariherimoni, reHemoni, uye Sanir, negomo reHerimoni. For zvirokwazvo, nhamba yavo yakanga yakawanda.
5:24 Uye izvi zvaiva vatungamiriri veimba yavo pehama: Eferi, uye Ishi, naErieri, naAshirieri, uye Jeremiah, naHodhavhia, naJadhieri, akashinga zvikuru uye simba varume, uye mbiri vatungamiriri dzavo.
5:25 Asi vakasiya Mwari wamadzibaba avo, uye ivo vakanyepa vamwari vavanhu venyika, uyo Mwari akabvisa pamberi pavo.
5:26 Naizvozvo Mwari waIsraeri akamutsa mweya waPuri, mambo weAsiriya, uye nomweya waTirigatipirineseri, mambo waAsiria. Uye akazvitora Reuben, naGadhi, uye imwe hafu yorudzi rwaManase. Zvino akavatungamirira Hara, uye kuti napaHabhori, uye kuna Hara, uye kusvikira parwizi Gozani, kusvikira nhasi.
6:1 Vanakomana vaRevhi: Gerishomi, Kohati, naMerari.
6:2 Vanakomana vaKohati: Amram, naIshari, Hebhuroni, naUzieri.
6:3 Vanakomana vaAmirami: Aaron, Moses, uye Miriami. Vanakomana vaAroni: Nadhabhi naAbhihu, Ereazari naItamari.
6:4 Eriazari pamuviri Finiyasi, naFiniyasi mimba Abhishua.
6:5 Zvirokwazvo, Abhishua pamuviri Bhuki, Bhuki mimba Uzi.
6:6 Uzi pamuviri waZerahia, Zerahiya mimba Merayoti.
6:7 Ipapo Merayoti pamuviri Amaria, Amaria mimba waAitubi.
6:8 Ahitub pamuviri Zadhoki, naZadhoki mimba Ahimaazi.
6:9 Ahimaazi pamuviri Azaria; Azaria pamuviri Johwanani.
6:10 Johwanani pamuviri Azaria. Ndiye uyo akaurayiwa roupristi muimba yakavakwa naSoromoni paJerusaremu.
6:11 Zvino Azaria pamuviri Amaria, Amaria mimba waAitubi.
6:12 Ahitub pamuviri Zadhoki, uye Zadhoki mimba Sharumi.
6:13 Sharumi pamuviri Hirikia, Hirikia mimba Azaria.
6:14 Azaria pamuviri Seraya, Seraya mimba Jehozadhaki.
6:15 Now waJehozadhaki akabva, kana Ishe wakatora Judha neJerusarema, nemaoko Nebhukadhinezari.
6:16 Saka vaRevhi vaiva Gerishomi, Kohati, naMerari.
6:17 Ndiwo mazita avanakomana vaGerishomi: Ribhini naShimei.
6:18 Vanakomana vaKohati: Amram, naIshari, uye Hebhuroni, naUzieri.
6:19 Vanakomana vaMerari: Mari naMushi. Uye saka ndivo hama Revhi, nemhuri dzavo.
6:20 waGerishomi: Ribhini mwanakomana wake, Jahati mwanakomana wake, NaZima mwanakomana wake,
6:21 NaJoa mwanakomana wake, Idho mwanakomana wake, NaZera mwanakomana wake, NaJaterai mwanakomana wake.
6:22 Vanakomana vaKohati: Aminadhabhu mwanakomana wake, Kora mwanakomana wake, Asiri mwanakomana wake,
6:23 NaErikana mwanakomana wake, NaAbhiasafit mwanakomana wake, Asiri mwanakomana wake,
6:24 NaTahati mwanakomana wake, NaUrieri mwanakomana wake, Uziya mwanakomana wake, NaShauri mwanakomana wake.
6:25 Vanakomana vaErikana: Amasai naAhimoti
6:26 naErikana. Vanakomana vaErikana: Zofai mwanakomana wake, NaNahati mwanakomana wake,
6:27 Eriabhu mwanakomana wake, WaJerohamu mwanakomana wake, NaErikana mwanakomana wake.
6:28 Vanakomana Samuel: Vasseni dangwe, Abhija.
6:29 Zvino vanakomana vaMerari vaiva: Mari, Ribhini mwanakomana wake, Shimei mwanakomana wake, Uza mwanakomana wake,
6:30 WaShimea mwanakomana wake, NaHagia mwanakomana wake, NaAsaya mwanakomana wake.
6:31 Ava ndivo David akagadza pamusoro nokuimba varume mumba yaJehovha, panzvimbo areka raiva.
6:32 Ivo waibata pamberi petabhenakeri yechipupuriro vachiimba, kusvikira Soromoni avaka imba yaJehovha muJerusarema. Uye vangadai vamire maererano hurongwa hwavo muushumiri.
6:33 Zvirokwazvo, izvi ndivo vakanga kubatsira, nevanakomana vavo, kuvanakomana vaKohati: muimbi vaHemani, mwanakomana waJoeri, mwanakomana waSamueri,
6:34 mwanakomana waErikana, mwanakomana waJerohami, mwanakomana waErieri, mwanakomana waToa,
6:35 mwanakomana waZufi, mwanakomana waErikana, mwanakomana waMahati, mwanakomana waAmasai,
6:36 mwanakomana waErikana, mwanakomana waJoeri, mwanakomana waAzaria, mwanakomana waZefaniya,
6:37 mwanakomana waTahati, mwanakomana waAsiri, mwanakomana waEbhiasafi, mwanakomana waKora,
6:38 mwanakomana waIzari, mwanakomana waKohati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waIsraeri.
6:39 Zvino kwakange kune mukoma wake, Asafi, akanga amire kurudyi rwake, Asafi, mwanakomana waBherekia, mwanakomana waShimea,
6:40 mwanakomana waMikaeri, mwanakomana waBhaaseya, mwanakomana waMarikija,
6:41 mwanakomana waItini, mwanakomana waZera, mwanakomana waAdhaya,
6:42 mwanakomana Ethan, mwanakomana waZima, mwanakomana waShimei,
6:43 mwanakomana Jahati, mwanakomana waGerishomi, mwanakomana waRevhi.
6:44 Zvino vanakomana vaMerari, hama dzavo, vakanga kuruboshwe: Ethan, mwanakomana waKishi, mwanakomana waAbhidhi, mwanakomana waMaruki,
6:45 mwanakomana waHashabhia, mwanakomana waAmazia, mwanakomana waHirikia,
6:46 mwanakomana waAmizi, mwanakomana Boni, mwanakomana waShemeri,
6:47 mwanakomana waMari, mwanakomana waMerari, mwanakomana vaMerari, mwanakomana waRevhi.
6:48 Paivawo hama dzavo, VaRevhi vakanga vagadzwa ose ushumiri tabhenakeri yeimba yaJehovha.
6:49 Zvirokwazvo, Aroni navanakomana vake vakanga yezvipiriso zvinopiswa paatari zvinopiswa paaritari yezvinonhuhwira, nokuti basa yose tsvene, uye kunyengetera achimiririra vaIsraeri, maererano zvose Mosesi, muranda waMwari, akanga adzidziswa.
6:50 Zvino ava ndivo vanakomana vaAroni: Ereazari mwanakomana wake, Pinehasi mwanakomana wake, NaAbhishua mwanakomana wake,
6:51 Bhuki mwanakomana wake, Uzi mwanakomana wake, WaZerahia mwanakomana wake,
6:52 NaMerayoti mwanakomana wake, Amaria mwanakomana wake, Ahitub mwanakomana wake,
6:53 Zadhoki mwanakomana wake, Ahimaazi mwanakomana wake.
6:54 Uye ndidzo Ndipo pavaigara maererano mumisha uye pakupedzisira, zvakananga vanakomana vaAroni, maererano nekuhama yavaKohati. Nokuti ndokuwira nemujenya.
6:55 uye saka, Hebhuroni, munyika yaJudha, uye aro kumativi ose, kwavari,
6:56 asi vakapa minda yeguta, nemisha, kuna Caleb, mwanakomana waJefune.
6:57 ndokubva, vanakomana vaAroni, vakapa maguta outiziro: Hebhuroni, uye Ribhina namafuro aro,
6:58 uyewo Jatiri uye Eshitemoa namafuro awo, ipapo uyewo neHireni uye Dhebhiri namafuro awo,
6:59 uyewo neAshani neBheti-shemeshi namafuro awo.
6:60 Uye kubva kurudzi rwaBhenjamini: Gebha namafuro aro, naAremeti namafuro aro, uyewo neAnatoti namafuro aro. Maguta ose padzimba dzavo pehama vaiva gumi.
6:61 Zvino vanakomana vaKohati, avo vasara yavo kuhama, vakapa maguta gumi, kubva rumwe hafu yorudzi rwaManase, ive;
6:62 uye kuti Vanakomana vaGerishomi, nemhuri dzavo, kubva kurudzi rwaIsakari, uye kubva kurudzi rwaAsheri, uye kubva kurudzi rwaNafutari, uye kubva kurudzi rwaManase paBhashani: gumi nenhatu maguta.
6:63 Zvino vanakomana vaMerari, nemhuri dzavo, kubva kurudzi rwaRubheni, uye kubva kurudzi rwaGadhi, uye kubva kurudzi rwaZebhuruni, Vakapa namaguta mujenya gumi.
6:64 wo, vanakomana vaIsraeri vakapa, vaRevhi, maguta namafuro awo,
6:65 vakavapa nemijenya, kubva revanakomana vaJudha, uye kubva revanakomana vaSimiyoni, uye kubva revanakomana vaBhenjamini, maguta aya, izvo Vakadana mazita avo.
6:66 Uye kune vaya vari kubva kuhama yevanakomana vaKohati, maguta pamwe ukomba avo kubva kurudzi rwaEfuremu.
6:67 Vakabva akavapa maguta outiziro: Shekemu namafuro aro pagomo yaEfuremu, neGezeri namafuro aro,
6:68 uyewo neJokimeami namafuro aro, neBheti-horoni Saizvozvowo,
6:69 uye zvirokwazvo neHireni aro, neGatirimoni saizvozvo.
6:70 Zvadaro zvakare, kubva rumwe hafu yorudzi rwaManase: Aneri namafuro aro, Bharamu uye aro; aya akaenda avo vakanga vasara kubva kuhama yevanakomana vaKohati.
6:71 Uye kuti Vanakomana vaGerishomi, kubva hama imwe hafu yorudzi rwaManase: Gorani, paBhashani, uye aro, neAshitaroti namafuro aro;
6:72 kubva kurudzi rwaIsakari: Kedheshi aro, uye neDhabherati namafuro aro,
6:73 uyewo Ramoti uye aro, neAnemi namafuro aro;
6:74 zvechokwadi, kubva kurudzi rwaAsheri: Mashari namafuro aro, uye Abdhoni yakafanana;
6:75 uyewo Hukkok uye aro, uye Rehobhu namafuro aro;
6:76 uyezve, kubva kurudzi rwaNafutari: Kedheshi muGarirea uye aro, NeHamoni namafuro aro, neKiriataimi uye aro.
6:77 Zvino vanakomana yasara vaMerari, kubva kurudzi rwaZebhuruni: Rimono namafuro aro, uye neTabhori namafuro aro;
6:78 uye zvakare, mhiri kwaJoridhani paJeriko pakatarisana, dzakatarira kumabvazuva kweJorodhani, kubva kurudzi rwaRubheni: Bhezeri murenje namafuro aro, uye neJaza namafuro aro;
6:79 uyewo neKedhemoti aro, neMefati namafuro aro;
6:80 zvechokwadi, kubva kurudzi rwaGadhi: Ramoti Gireadhi uye aro, neMahanaimu namafuro aro;
6:81 iyewo, Heshibhoni namafuro aro, neJazeri namafuro aro.
7:1 Zvino vanakomana vaIsakari vaiva Tora, naPua, NaJashubhi, naShimironi, mana.
7:2 Vanakomana vaTora: Uzi, naRefaya, naJerieri, naJerieri, naIbhisami, naShemueri, Vatungamiriri nedzimba dzavo nehama. Kubva ndiri vaTora, ipapo vakaverengwa, pamazuva aDhavhidhi, varume vakasimba kwazvo makumi maviri nezviviri namazana matanhatu.
7:3 Vanakomana vaUzi: Izirahiya, kubva uyo vakaberekerwa: Michael, uye Obadiah, uye Joel, naIshia; zvose vashanu vari vatungamiri.
7:4 Uye pamwechete navo, nemhuri dzavo uye marudzi, kwaiva nevarume makumi matatu nezvitanhatu simba kwazvo, akasunga hondo. Uye vakanga vana vakadzi vazhinji nevana.
7:5 wo, hama dzavo, yose hama rwaIsakari, vakaverengwa sezvo zviuru makumi masere nemanomwe, zvakakodzera chaizvo kurwa.
7:6 Vanakomana vaBhenjamini: akanaka, naBhekeri, uye naJedhiyaeri, tatu.
7:7 Vanakomana vaBhera: Ezibhoni, Uzi, naUzieri, naJerimoti naIri, Vatungamiri vashanu vemhuri, uyewo ikodzere chaizvo kurwa; uye nhamba yavo yakanga makumi maviri nezviviri namakumi matatu navana.
7:8 Zvino vanakomana vaBhekeri: Zemira, Joashi, Eriezeri, uye Erioenai, uye Omri, naJeremoti, Abhija, neAnatoti, naArimeti: ava vose vaiva vanakomana vaBhekeri.
7:9 Uye vakaverengwa maererano nemhuri dzavo, nevatungamiriri vavo nehama, chaizvo simba muhondo, zviuru makumi maviri namazana maviri.
7:10 Zvino vanakomana vaJedhiyaeri: Bhirihani, uye vanakomana vaBhirihani: Jeushi, uye Benjamin, Ehudhi, uye waKenaani, naKanani, naZetani, uye Tashishi, naAhishahari.
7:11 Vose ava vaiva vanakomana vaJedhiyaeri, Vatungamiriri vavo nehama, simba chaizvo varume, zviuru gumi nezvinomwe namazana maviri, Kubuda kundorwa.
7:12 wo, NaShupimiwo, naHupimi, vanakomana vaIri; naHushimi, vanakomana vaAheri.
7:13 Vanakomana vaNafutari: Jazieri, uye Guni, naJezeri, Sharumi, vanakomana vaBhiriha.
7:14 wo, mwanakomana waManase: naAsirieri. Uye nomurongo wake, reSiriya, akabereka Makiri, baba vaGiriyadhi.
7:15 Zvino Makiri akatora vakadzi vavanakomana vake, NaHupimi naShupimi. Uye akanga ane hanzvadzi yainzi Maaka; asi zita rowechipiri rakanga riri Zerofehadhi, uye pavakaberekerwa vanasikana vaZerofehadhi.
7:16 naMaaka, mukadzi waMakiri, akabereka mwanakomana, akatumidza zita rake Pereshi. Uye zita remunin'ina wake raiva Shereshi. Uye vanakomana vake vakanga vari Urami naRakemi.
7:17 Ipapo mwanakomana vaUrami: Bharaki. Ndivo vanakomana vaGiriyadhi, mwanakomana waMakiri, mwanakomana waManase.
7:18 Uye hanzvadzi yake, Regina, bhowa Ishodhi, vaAbhiezeri, Mara.
7:19 Zvino vanakomana vaShemidha Ahiani, naShekemu, uye naRiki naAniami.
7:20 Vanakomana vaEfuremu: Shutera, Bheredhi nomwanakomana wake, NaTahati mwanakomana wake, NaEreadha mwanakomana wake, NaTahati mwanakomana wake, ane mwanakomana wake akanga Zabhadhi,
7:21 uye mwanakomana wake waiva vaShutera, uye mwanakomana wake waiva Ezeri, uyewo naEreadhi. Asi varume wezvizvarwa kuGati akavauraya, nekuti vakanga aburukira dzikambouya zvavo.
7:22 Uye saka baba vavo, Ephraim, akavachema mazuva mazhinji; nehama dzake vasvika, saka kuti vavanyaradze iye.
7:23 Uye akapinda wake; iye akatora pamuviri, akabereka mwanakomana. Akamutumidza zita rinonzi Bheriya, nekuti akasimuka panguva yakaipa imba yake.
7:24 Zvino mwanasikana wake aiva Sheera, uyo akavaka yakaderera uye paBheti-horoni kumusoro, uyewo Uzzen-Sheera.
7:25 WaEfuremu aiva mwanakomana wake, naReshefi, uye kwave, kubva kwakazvarwa naTahani,
7:26 yaiye Radhani. Uye mwanakomana wake waiva waAmihudhi, yaiye Erishama,
7:27 kubva kwakazvarwa Nun, akanga Joshua semwanakomana.
7:28 Zvino yavo uye Nokutabhenakeri vaiva: Bheteri nevanasikana vake, uye kumabvazuva, Naaram, nokurutivi rwokumavirira nharaunda, Gezeri navanasikana vake, uyewo Shekemu nevanasikana vake, kusvikira Ayyah nevanasikana vake;
7:29 wo, parutivi vanakomana vaManase, PaBhetisheani navanasikana vake, Taanaki navanasikana vake, Megidho navanasikana vake, Dhori navanasikana vake. Munzvimbo idzi, paigara vanakomana vaJosefa, mwanakomana waIsraeri.
7:30 Vanakomana vaAsheri: Imuna, naIshivha, naIshivi, naBheriya, naSera hanzvadzi yavo.
7:31 Vanakomana vaBheriya: Heber, naMarikieri, ndiye baba vaBhirizaiti.
7:32 Zvino Hebheri pamuviri vaJafureti, naShomeri, naHotami, uye hanzvadzi yavo Shua.
7:33 Vanakomana vaJafureti: mitsetse, naBhimari, naAshivati; Ndivo vanakomana vaJafureti.
7:34 Ipapo vanakomana waShomeri: ahi,, naRoga, uye naJehubha, uye Aram.
7:35 Vanakomana vaHeremi, mukoma wake: Zofa, naImina, naShereshi, naAmari.
7:36 Vanakomana vaZofa: Shua, naHarineferi, uye shuari, uye ipai, naImira,
7:37 Bhezeri, naHodhavhiya, naShama, naShirisha, uye Itirani, naBheera.
7:38 Vanakomana vaJeteri: waJefune, naPisipa, uye Ara.
7:39 Vanakomana vaUra: divi, naHanieri, naRizia.
7:40 Vose ava vaiva vanakomana vaAsheri, vakuru vemhuri, vasanangurwa uye vatongi simba kwazvo pakati vatongi. Uye nhamba yevaya vakanga zera chakanga chakakodzera hondo yakanga zviuru makumi maviri nezvitanhatu.
8:1 Zvino Benjamin mimba vaBhera dangwe rake, NaAshibheri wechipiri, NaAhara wechitatu,
8:2 NaNowa wechina, naRafa wechishanu.
8:3 Vanakomana vaBhera vaiva: adhari, naGera, naAbhihudhi,
8:4 uyewo Abhishua, uye Naamani, naAhoa,
8:5 ipapo nemiwo Gera, naShefufani, naHurami.
8:6 Ava ndivo vanakomana vaEhudhi, Vatungamiriri pehama pavapenyu Gebha, vakanga vabva kuna Manahati.
8:8 Ipapo Shaharaimi mimba, munharaunda weMoabhu, pashure akaendisa Hushimi naBhaara, madzimai ake;
8:9 uye saka, mukadzi wake Hodheshi, akabereka Jobhabhu, uye Zibhia, uye Mesha, naMarikami,
8:10 uyewo naJeuzi uye Sachia, naMirima. Ndivo vanakomana vake, vakuru dzavo.
8:11 Zvirokwazvo, Hushimi pamuviri Abhitubhi vaEripaari.
8:12 Vanakomana vaEripaari vaiva Ebheri, naMishami, uye naShemedhi, uyo akavaka Ono neRodhi aro vanasikana.
8:13 Zvino naBheria naShema vaiva vakuru dzavo vaigara paAjaroni; izvi akaisa kutiza vagere paGati.
8:14 naAhiyo, uye vaShashaki, naJeremoti,
8:15 naZebhadhia, uye Arad, naEdheri,
8:16 uyewo Michael, naIshipa, naJoha, vanakomana vaBheira.
8:17 Ipapo naZebhadhia, naMeshuramu, naHiziki, Hebheri,
8:18 naIshimerai, uye naIziria, Jobhabhu vaiva vanakomana vaEripaari.
8:19 Ipapo Jakimi, naZikiri, naZabhudhi,
8:20 naErienai, naZiretai, naErieri,
8:21 naAdhaya, naBheraya, naShimirati vaiva vanakomana vaShimei.
8:22 Ipapo Ishipani, Ebheru, naErieri,
8:23 uye Abdhoni, naZikiri, uye Hanan,
8:24 naHanania, uye Eramu, naAnatotiya,
8:25 naIfudheya, naPenueri vaiva vanakomana vaShashaki.
8:26 Ipapo Shamisherai, neSheharia Ataria,
8:27 naJareshia, uye Eriya, naZikiri vaiva vanakomana vaJehorami.
8:28 Ndivo vemadzitateguru vakuru vemhuri vaigara muJerusarema.
8:29 Zvino paGibhiyoni, maigara naJeyieri, baba vaGibhiyoni; uye zita romukadzi wake rakanga riri Maaka,
8:30 uye mwanakomana wake wedangwe ainzi Abhidhoni, uye zvadaro Zur, Kishi, Bhaari, Nadhabhi,
8:31 naGedhori, naAhiyo, naZekariya, uye Mikroti.
8:32 Mikiroti mimba Shimea. Uye vakagara pakatarisana nehama dzavo muJerusarema, nehama dzavo.
8:33 Zvino Neri pamuviri Kishi, Kishi mimba Sauro. Ipapo Sauro pamuviri Jonathan, naMarikishua, naAbhinadhabhu, naEshibhaari.
8:34 Mwanakomana waJonatani akanga ari Meribhibhaari; Meribhibhaari mimba Micah.
8:35 Vanakomana vaMika vaiva Pitoni, Mereki, naTarea, uye Ahazi.
8:36 Ahazi mimba Joadha. Joadha mimba Arimeti, uye naAzimavheti, Zimiri. Uye Zimiri mimba Moza.
8:37 Moza mimba vaBhinea, ane mwanakomana wake akanga Rafa, kwakazvarwa Ereasa, yaiye vaAzeri.
8:38 Zvino kwaiva nevanakomana matanhatu vaAzeri, mazita avo waAzirikami, Bhokeru, Ishmael, naShearia, Obadiah, uye Hanan. Vose ava vaiva vanakomana vaAzeri.
8:39 Vanakomana vaEsheki, mukoma wake, Urami dangwe, Jeushi wechipiri, naErifereti wechitatu.
8:40 Vanakomana vaUrami vaiva nesimba chaizvo varume, nouta nesimba guru. Uye vakanga vana vazhinji uye vazukuru, kunyange zana namakumi mashanu. Ava vose vaiva vanakomana vaBhenjamini.
9:1 uye saka, zvose vaIsraeri akaverengwa. Uye kuwanda kwavo zvakanyorwa mubhuku yamadzimambo aIsraeri neaJudha. Ivo vakatorwa kuBhabhironi nokuda kokudarika kwavo.
9:2 Zvino vakatanga kugara panyika yavo uye mumaguta avo vaiva vaIsraeri, uye vapristi, uye vaRevhi, uye vaNetinimi.
9:3 Kugara muJerusarema vaiva vamwe vanakomana vaJudha, uye kubva kuvanakomana vaBhenjamini, uyewo kubva kuvanakomana yaEfuremu rwaManase:
9:4 Utha, mwanakomana waAmihudhi, mwanakomana waOmiri, mwanakomana waImiri, mwanakomana waBhani, kubva kuvanakomana vaPerezi, mwanakomana waJudha.
9:5 Uye kubva womuShironi: Asaya mwanakomana wedangwe, uye vanakomana vake.
9:6 Zvino kubva Vanakomana vaZera: Jeueri, nehama dzavo, mazana matanhatu mapfumbamwe.
9:7 Uye kubva kuvanakomana vaBhenjamini: Sllu, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waHodhavhia, mwanakomana waHasenua;
9:8 Nalbheneya, mwanakomana waJerohami; Era, mwanakomana waUzi, mwanakomana waMikiri; naMeshuramu, mwanakomana waShefatia, mwanakomana waReueri, mwanakomana waIbhiniya;
9:9 nehama dzavo nemhuri dzavo, mapfumbamwe namakumi mashanu namatanhatu. Vose ava vaiva vakuru vavo nehama, nedzimba dzamadzibaba avo.
9:10 Uye kubva kuvapristi: Jedhaya, naJehoyaribhi, naJakini;
9:11 uyewo Azaria, mwanakomana waHirikia, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waZadhoki, mwanakomana waMerayoti, mwanakomana waAhitubhi, mupristi weimba yaMwari;
9:12 ipapo naAdhaya, mwanakomana waJerohami, mwanakomana waPashuri, mwanakomana waMarikija; naMaasai, mwanakomana waAdhieri, mwanakomana waJazera, mwanakomana waMeshurami, mwanakomana waMeshiremiti, mwanakomana waImeri;
9:13 uye hama dzavo, Vatungamiriri nemhuri dzavo, chimwe namazana manomwe namakumi matanhatu, simba chaizvo ruzivo varume, nokuti basa ushumiri muimba yaMwari.
9:14 Zvino kubva vaRevhi: Shemaya, mwanakomana waHashubhi, mwanakomana waAzirikami, mwanakomana waHashabhia, wavanakomana vaMerari;
9:15 uyewo Bhakibhaka muvezi; naGarari; naMatania, mwanakomana waMika, mwanakomana waZikiri, mwanakomana waAsafi;
9:16 uye Obadiah, mwanakomana waShemaya, mwanakomana waGarari, mwanakomana waJedhutuni; naBherekia, mwanakomana waAsa, mwanakomana waErikana, uyo akararama pamukova muNetofa.
9:17 Zvino vemikova vakanga Sharumi, uye naAkubhi, naTarimoni, naAhimani; uye mukoma wavo Sharumi aiva mutungamiriri.
9:18 Nokuti kusvikira nguva, pagedhi ramambo kumabvazuva, Vanakomana vaRevhi vakashumira zvavo majana.
9:19 Zvirokwazvo, Sharumi, mwanakomana waKore, mwanakomana waEbhiasafi, mwanakomana waKora, nehama dzake uye neimba yababa vake, vaKora izvi, vaitarira mabasa ushumiri vanochengeta vestibules dzetabhenakeri. Nemhuri dzavo, vachichinjana, nokuchengeta mukova kumusasa Ishe.
9:20 zvino Pinehasi, mwanakomana waEreazari, aiva mutongi wavo pamberi paJehovha.
9:21 asi Zechariah, mwanakomana waMesheremia, aiva muchengeti pagedhi tabhenakeri yeChipupuriro.
9:22 All izvi, wakasarudzwa vatakuri masuo, vakasvika mazana maviri navaviri. Uye vakanga akanyorwa mumaguta avo pachavo, avo David, uye muoni Samuel, vakagadzwa, mukutenda kwavo,
9:23 sezvo navo, saizvozvowo nevanakomana vavo, pamasuwo eimba yaJehovha uye tabhenakeri, vavo madzoro.
9:24 At kumativi mana, paiva vemikova, ndiko, kurutivi rwamabvazuva, uye kumavirira, uye kuchamhembe, uye kumaodzanyemba.
9:25 Zvino hama dzavo dzakanga kugara mumisha, uye vakasvika pamusoro pamasabata dzavo, nguva nenguva.
9:26 To vaRevhi izvi zvina vakachengeteswa rose nhamba vemikova, uye ivo vaitarira makamuri uye matura eimba yaJehovha.
9:27 Uye vakaramba vari dzokurinda dzavo, kumativi ose mutemberi yaJehovha, kuti, nguva yakanga yasvika, vanogona kuzarura masuo mangwanani.
9:28 Vamwe kubva kuhama dzavo vaitarirawo midziyo ushumiri. Nokuti nemidziyo vose vakatakurwa uye kunze maererano nhamba.
9:29 Vamwe vavozve vakachengeteswa zvokushandisa tsvene; vakanga vari vatariri upfu hwakatsetseka negorosi, uye waini, nemafuta, nezvinonhuhwira, uye aromatics.
9:30 Zvino vanakomana vavapristi akanyora kwamafuta kubva aromatics.
9:31 naMatitia, muRevhi, wedangwe waSharumi, wavaKora, aitarisira zvinhu zvakanga yakabikwa imwe chakabikwa pani.
9:32 Zvino vamwe vanakomana vaKohati, hama dzavo, vaitarira chingwa kuvapo, kuitira kuti nguva kuigadzira idzva sabata rimwe nerimwe.
9:33 Ndivo vakuru navaimbi varume, maererano vemhuri dzavaRevhi, vaigara mumakamuri, kuitira kuti ushumiri hwavo dzose, masikati nousiku.
9:34 The vevaRevhi, Vatungamiriri nemhuri dzavo, vakagara muJerusarema.
9:35 Zvino paGibhiyoni, maigara naJeyieri, baba vaGibhiyoni, uye zita romukadzi wake rakanga riri Maaka.
9:36 Mwanakomana wake wedangwe aiva Abhidhoni, uye zvadaro Zur, Kishi, Bhaari, naNeri, Nadhabhi,
9:37 uyewo paGedhori, naAhiyo, naZekariya, uye Mikroti.
9:38 Ipapo Mikiroti pamuviri vaShimeamu. Izvi vaigara pakatarisana nehama dzavo muJerusarema, nehama dzavo.
9:39 Zvino Neri pamuviri Kishi, Kishi mimba Sauro. Uye Sauro akava nemimba Jonathan, naMarikishua, naAbhinadhabhu, naEshibhaari.
9:40 Mwanakomana waJonatani akanga ari Meribhibhaari. Meribhibhaari mimba Micah.
9:41 Zvino vanakomana vaMika vaiva Pitoni, Mereki, naAhazi, uye Ahazi.
9:42 Ahazi mimba Jara. Jara mimba Arimeti, uye naAzimavheti, Zimiri. Zvino Zimiri pamuviri Moza.
9:43 Zvirokwazvo, Moza pamuviri vaBhinea, ane mwanakomana, naRefaya, pamuviri Ereasa, kubva kwakazvarwa vaAzeri.
9:44 Zvino Azeri aiva nevanakomana vatanhatu, vane mazita: waAzirikami, Bhokeru, Ishmael, naShearia, Obadiah, Hanan. Ndivo vanakomana vaAzeri.
10:1 Zvino vaFirisitia vakarwa navaIsiraeri, uye varume vaIsraeri vakatiza vaFiristiya, uye ivo vakawira pasi vaurawa pagomo reGiribhoa.
10:2 Zvino vaFirisitia vakanga pedyo, kutevera Sauro navanakomana vake, vakauraya Jonatani, naAbhinadhabhu, naMarikishua, vanakomana vaSauro.
10:3 Kurwa kwakakurira rwuchirema pamusoro Sauro. Uye vapfuri vamuwana, uye ivo akamukuvadza nemiseve.
10:4 Ipapo Sauro akati kunowaibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo: "Unsheathe bakatwa rako undiuraye. zvimwe, varume ava vasina kudzingiswa varege kusvika uye vakandiseka. "Asi wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakaramba, ndapera nokutya. uye saka, Sauro akabata munondo wake, ndokuwira pamusoro payo.
10:5 Zvino wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakati aona izvi, zvakananga, kuti Sauro akanga afa, Iye zvino akazviwisira pamunondo wake, uye akafa.
10:6 saka, Sauro akafa, uye vanakomana vake vatatu zvapfuura, uye imba yake yose yakawira, pamwe chete.
10:7 Zvino varume vaIsiraeri vakanga vachigara pamapani vaona izvi, vakatiza. Uye sezvo Sauro navanakomana vake vakanga vafawo, vakasiya maguta avo vakapararira, pano uye ikoko. Zvino vaFirisitia vasvika uye vakagara pakati pavo.
10:8 ndokubva, pazuva rakatevera, Zvino vaFirisitia vakanga wonditorera zvakapambwa navakaurawa, vakawana Sauro navanakomana vake, avete pagomo reGiribhoa.
10:9 Uye vakati vakapambwa iye, uye akanga akagura musoro wake, uye akanga nokusunungura nhumbi dzake dzokurwa nadzo, vakatumira zvinhu munyika yavo, kuitira kuti kutakurwa uye akaratidza mumatemberi zvidhori uye kuti vanhu.
10:10 Asi dzake dzokurwa nadzo ivo vagadzwe neKijuni mwari wavo, uye musoro wake Zviine mutemberi yaDhagoni.
10:11 Apo varume veJabheshigiriyadi anzwa izvi, zvakananga, zvose kuti vaFirisitia zvaitirwa pamusoro Sauro,
10:12 mumwe nomumwe wevarume vakashinga vakasimuka, vakatora zvitunha Sauro navanakomana vake. Uye vakauya nazvo Jabheshi. Vakaviga mapfupa avo pasi pomuoki yaiva paJabheshi. Vakatsanya kwemazuva manomwe.
10:13 Saka Sauro akafa nokuda kwezvakaipa zvake, nokuti akatengesa murayiro waShe raakanga arayira, uye asina kurichengeta. uyezve, iye kunyange akabvunza mukadzi muvuki;
10:14 nokuti haana kuvimba naJehovha. Nokuda kwaizvozvi, akaita rufu rwake, uye aidururira hwake kuna Dhavhidhi, mwanakomana waJese.
11:1 Zvino vaIsraeri vose vakaungana kuna Dhavhidhi paHebhuroni, vachiti: "Tiri pfupa renyu nenyama yenyu.
11:2 wo, zuro uye zuva risati, apo Sauro achiri akatonga, makanga iye maibuda vaIsiraeri. Nokuti Jehovha Mwari wenyu akati kwamuri: 'Munofanira kumafuro vanhu vangu Israeri, uye iwe uchava mutungamiriri pamusoro pavo. ' "
11:3 saka, vose mukuru pakuzvarwa vaIsraeri vakaenda kuna mambo paHebhuroni. Dhavhidhi akaita chibvumirano navo pamberi paJehovha. Ivo ave mambo wavaIsiraeri, maererano neshoko raJehovha, raakataura nomuromo Samuel.
11:4 Ipapo Dhavhidhi zvose vaIsraeri vakaenda kuJerusarema. Ndiro neJebhusi, apo vaJebhusi, vagere munyika, vakanga.
11:5 Uye vaya vaigara paJebhusi vakati kuna Dhavhidhi: "Unofanira kupinda pano." Asi Dhavhidhi akabata nhare yeZiyoni, ndiro guta raDhavhidhi.
11:6 Akati, "Ani naani ucharova vaJebhusi, achava mutungamiri. "Uye saka Joabhu, mwanakomana waZeruya, akwira kutanga, uye akanga aita mutungamiri.
11:7 Ipapo Dhavhidhi akagara munhare, uye nokuda kwechikonzero ichi rainzi Guta raDhavhidhi.
11:8 Akavaka guta kumativi ose, kubva paMiro kusvikira kumativi ose. Asi Joabhu akavaka vamwe guta.
11:9 Dhavhidhi akaramba achikwirira uye kuwedzera, uye Jehovha wehondo aiva naye.
11:10 Ndivo vatungamiriri simba varume David, uyo kubatsira iye, kuti aizova mambo vaIsiraeri vose, maererano neshoko raJehovha, raakataura kuna Israeri.
11:11 Ndiko kuwanda akasimba yaDhavhidhi: Joshobhiyami, mwanakomana wokuHakimoni, mutungamiri pakati matatu. Akasimudza pfumo rake vanhu mazana matatu, vakanga vakuvadzwa pane imwe nguva.
11:12 Akamutevera, paiva Ereazari, mwanakomana wababamudiki vake, womuAhohi, akanga pakati vatatu vane simba.
11:13 Iye akanga ana Dhavhidhi ari Pasdammim, Zvino vaFirisitia vakaungana kuti nzvimbo kurwa. Zvino munda iyoyo rakanga rizere nebhari, asi vanhu vakanga vatiza pamberi pavaFirisitia.
11:14 Varume ava vakamira pakati dzesango, uye ivo akarirwira. Uye vakati akaparadza vaFiristia, Jehovha akapa ruponeso rukuru kuvanhu vake.
11:15 Zvino vatatu kubva vatungamiri matatu akaburuka kudombo paiva naDhavhidhi, kubako reAdhurami, Zvino vaFirisitia aita musasa mumupata wevaRefaimu.
11:16 Zvino Dhavhidhi wakange ari munhare, uye boka ravarwi vavaFirisitia raiva paBheterehemu.
11:17 Zvino Dhavhidhi aida uye akati, "O Dai mumwe achindipa mvura kubva mutsime reBheterehema, riri pasuwo!"
11:18 saka, izvi nhatu dzakapasanura napakati kusvikira pakati pehondo yavaFirisitia, vakachera mvura kubva mutsime reBheterehema, raiva pagedhi. Vakarikunda kuna Dhavhidhi, kuti anwe. Asi akanga asingadi; uye pachinzvimbo, akazviita somunhu chinonwiwa kuna Jehovha,
11:19 vachiti: "Ngazvive kure neni, kuti ndinoda kuita izvi pamberi paMwari wangu, uye kuti ndinoda kunwa ropa revarume ava. Nekuti nokusvitsa hwavo, vakauya mvura kwandiri. "Uye nokuda kwechikonzero ichi, akanga kuinwa. The matatu kupfuura simba zvaitwa izvi.
11:20 wo, Abhishai, munin'ina waJoabhu, aiva mutungamiriri vatatu, akasimudza pfumo rake akarwa navana mazana matatu, vakanga vakuvadzwa. Uye akanga kupfuura vakakurumbira pakati pavatatu,
11:21 uye akanga nomukurumbira pakati wechipiri matatu uye mutungamiri wavo. Asi zvechokwadi, haana kusvika nhatu dzokutanga.
11:22 Bhenaya, mwanakomana waJehoyadha, kubva weKabhizeeri, aiva murume akura chaizvo, akanga mabasa akawanda. Akauraya vanakomana vaviri vaArieri Mwari kubva yaMoabhu. Uye akaburuka, akauraya shumba pakati gomba, munguva chando.
11:23 Iye akauraya mumwe murume muIjipiti, ane akasvika makubhiti mashanu, uye akanga ane pfumo rwakafanana nedanda romuruki. Asi akaburuka naye netsvimbo. Yakabata pfumo kuti akanga akabata muruoko rwake. Akamuuraya nepfumo rake.
11:24 Izvi zvakaitwa naBhenaya, mwanakomana waJehoyadha, uyo chakanyanyooma mbiri pakati pavatatu akasimba ndivo,
11:25 wekutanga pakati matatu. Asi zvechokwadi, haana kusvika vatatu. Ipapo Dhavhidhi akaisa naye parutivi nzeve yake.
11:26 Uyezve, akasimba varume vehondo vaiva Asaheri, munin'ina waJoabhu; uye Erihanani, mwanakomana wababamudiki vake, kubva kuBheterehema;
11:27 naShamoti, uye muHarodhi; Herezi, mumwe muPeroni;
11:28 Ira, mwanakomana waIkeshi, mumwe muTekoite; Abhiezeri, ane muAnatoti;
11:29 Sibhekai, mumwe muHushati; naIrai, womuAhohi;
11:30 Maharai, muNetofati; Heled, mwanakomana waBhaana, muNetofati;
11:31 naItai, mwanakomana waRibhai, kubva paGibhiya, Vanakomana vaBhenjamini; Bhenaya, muPiratoni;
11:32 vaJudha, kubva parukova dzeGaashi; waAbhieri, ane muAribhati; veAzimavheti, mumwe muBhaharumiti; naEriabha, mumwe muShaaribhoni.
11:33 Vanakomana Jehovha, mumwe vaHashemi muGizoni: Jonathan, mwanakomana waShage, muHarari;
11:34 Ahiami, mwanakomana Sachar, muHarari;
11:35 Imphal, mwanakomana muUri;
11:36 Heferi, ane muMekerati; Ahija, mumwe muPeroni;
11:37 Hazro, mumwe muKarimeri; Nhra, mwanakomana waEzibha;
11:38 Joel, munin'ina Nathan; naMibhari, mwanakomana waHagiri;
11:39 Zelek, muAmoni; naNaarai, muBheeroti, mubati wenhumbi dzokurwa nadzo dzaJoabhu, mwanakomana waZeruya;
11:40 Ira, muItiri; Garebhi, muItiri;
11:41 Uriya, muHiti; Zabhadhi, mwanakomana waArai;
11:42 naAdhina, mwanakomana waShiza, mumwe wavaRubheni, mutungamiri wavaRubheni, matatu vaakanga anavo;
11:43 Hanan, mwanakomana waMaaka; naJoshafati, mumwe muMitini;
11:44 Uziya, ane muAshiterati; NaShama naJeyieri, vanakomana vaHotami, ane muAroeri;
11:45 naJedhiaeri, mwanakomana waShimiri; naJoha, mukoma wake, muTizi;
11:46 Eliel, mumwe muMahavhi; naJeribhai naJoshavhia, vanakomana vaErinaami; naItima, wechiMoabhi; Eliel, Obhedhi, naJaasieri kubva muMezobha.
12:1 wo, izvi akaenda kuna Dhavhidhi paZikiragi, achiri achitiza Sauro, mwanakomana waKishi. Uye vaiva varwi simba chaizvo uye anokudzwa,
12:2 vaikunga uta, uye kushandisa kana ruoko mu vachikanda matombo pamwe nezvipfuramabwe, uye nemiseve. Kubva hama dzaSauro, kubva Benjamin:
12:3 Mutungamiri Ahiezeri, pamwe Joashi, vanakomana vaShemaa weGibhiya, naJezieri naPereti, vanakomana vaAzimavheti, naBheraka naJehu, muAnatoti.
12:4 wo, paiva naIshimaya, kubva paGibhiyoni, yakasimba pakati matatu uye aitarisira makumi matatu; Jeremiah, naJahazieri, naJohwanani, naJozabhadhi, kubva neGedhera;
12:5 uye naEruzai, naJerimoti, naBheriya, naShemaria, naShefatia, ari Haruphites;
12:6 Erikana, naIshia, naAzareri, uye naJoezeri, uye naJoshobhiyami, kubva Carehim;
12:7 uyewo naJoera naZebhadhia, vanakomana vaJehorami, kubva paGedhori.
12:8 Zvadaro zvakare, kubva Gadhi, ipapo vakaenda David, paaivanda murenje, akasimba chaizvo varume, vaiva varwi yakanaka, vanohubata nhovo nepfumo; zviso zvavo zvakanga zvakafanana zviso kweshumba, uye vakanga anomhanya akafanana nemharapara yenondo pamakomo.
12:9 Ezeri akanga ari mutungamiri, Wechipiri Obhadhiya, Wechitatu Eriabhi,
12:10 Wechina Misimana, Weshanu Jeremiya,
12:11 Atai wechitanhatu, Erieri wechinomwe,
12:12 Worusere Johwanani, Wepfumbamwe,
12:13 Jeremiah wegumi, Nomumwe Makibhanai.
12:14 Ndivo kuvana vaGadhi, Vatungamiriri vehondo. Muduku aiva mutariri mauto zana, uye mukuru waiva mutariri chiuru.
12:15 Ava ndivo vakayambuka Joridhani pamwedzi wokutanga, kana vakajaira rirege dzarwo. Vakaisa kutiza vose vaya vakanga kugara pamipata, kune kumabvazuva munzvimbo uye kumavirira.
12:16 Zvino vamwe Benjamin uye kubva Judha akasvika munhare apo David akanga achigara.
12:17 Dhavhidhi akabuda akasangana navo, uye akati: "Kana wasvika murunyararo, kuti ave mubatsiri kwandiri, mwoyo wangu achazvibatanidza iwe; asi kana mauya kuzondinyengera, kundiisa kuvadzivisi vangu, kunyange Handina zvakaipa pamaoko angu, Mwari wamadzibaba edu ngaazvione uye mutongi. "
12:18 Zvirokwazvo, Mweya akafuka Amasai, mutungamiriri pakati matatu, uye akati: "David, isu ndezvenyu! O mwanakomana waJese, tiri kwamuri! runyararo, rugare kwamuri, uye rugare navabatsiri venyu. Nokuti Mwari wenyu anokubatsirai. "Naizvozvo, David akavagamuchira, uye akagadza sevatungamiriri mauto.
12:19 Uyezve, vamwe vaManase vakayambukira David, Wakati achibudira navaFirisitia kundorwa naSauro, kuti arwe. Asi haana kurwa navo. Nekuti vatungamiriri avaFirisitia, kutora zano, amudzosa, vachiti, "Kuna nokusvitsa pamisoro yedu, Achadzokera ishe wake, Sauro. "
12:20 uye saka, paakadzoka Zikiragi, vamwe vakatiza pamusoro kwaari vachibva vaManase: Adhina, naJozabhadhi, uye naJedhiyaeri, uye Michael, uye Adhina, naJozabhadhi, uye Elihu, naZiretai, vatungamiri vezviuru paManase.
12:21 Izvi zvakabatsira Dhavhidhi kurwisa makororo. Nokuti vose vaiva varume voumhare kwazvo, uye vakava vatungamiriri muuto.
12:22 ndokubva, wo, vamwe vakasvika kuna Dhavhidhi kusvikira rimwe zuva, kuti amubatsire, kusvikira vakava vazhinji, sehondo yaMwari.
12:23 Zvino ichi ndicho kuwanda vatungamiri vehondo vakaenda kuna Dhavhidhi paaiva paHebhuroni, saka kuti uchatamisa ushe hwaSauro kwaari, maererano neshoko raJehovha:
12:24 vanakomana vaJudha, akatakura nhovo nepfumo, zvitanhatu namazana masere, vakagadzirira kurwa;
12:25 kubva kuvanakomana vaSimioni, varume vakasimba kwazvo nokuda kurwa, zvinomwe nezana rimwe;
12:26 kuvanakomana vaRevhi, zvina namazana matanhatu;
12:27 uyewo Jehoyadha, Mutungamiri kubva ndiri waAroni, uye pamwechete naye zvitatu namazana manomwe namakumi;
12:28 uye zvadaro Zadhoki, wechiduku anokudzwa unhu, neimba yababa vake, makumi-maviri vatungamiriri;
12:29 uye kubva kuvanakomana vaBhenjamini, hama dzaSauro, zviuru zvitatu, nokuti vachiri chikamu chikuru vavo vakanga vachitevera imba yaSauro.
12:30 Zvino kubva kuvanakomana vaEfuremu, paiva nezviuru makumi maviri nemazana masere, simba chaizvo uye aiva nevarume, mukurumbira pakati pehama.
12:31 Zvino mumwe hafu yorudzi rwaManase, zviuru gumi nezvisere, nomumwe mazita avo, akabuda kuitira kuti kugadza Dhavhidhi kuti ave mambo.
12:32 wo, kubva Vanakomana vaIsakari, pakanga vakadzidza nevarume, uyo aiziva rimwe nerimwe nguva, kuti kutarisira vaIsiraeri vanofanira kuita, Vatungamiri mazana maviri. Uye zvose Zvakasara worudzi vakanga vachitevera zano ravo.
12:33 ndokubva, kubva Zebhuruni, paiva vaya vakabuda kundorwa, uye vakanga vamire mumutsetse muhondo, vakagadzirira pamwe zvombo zvehondo; izvi zviuru makumi mashanu akasvika kubatsira, pasina Unyengeri hwakadini mwoyo.
12:34 Uye kubva Nafutari, paiva nomumwe zviuru vatungamiriri; uye pamwechete navo vaiva zvinomwe matatu zviuru, agadzirira vakabata nhovo nepfumo.
12:35 Zvino kubva paDhani, paiva makumi maviri nezvisere namazana matanhatu, kurwa.
12:36 Uye kubva Asheri, vakasvika zviuru makumi mana, Kubuda kurwa, uye akashevedza yokurwira.
12:37 ndokubva, mhiri kwaJodhani, pakanga paine, kuvanakomana vaRubheni, uye kubva Gadhi, uye kubva rumwe hafu yorudzi rwaManase, zana namakumi maviri nezviviri, vakagadzirira pamwe zvombo zvehondo.
12:38 Ava vose, varume vehondo, vakagadzirira kurwa, akaenda nemoyo yakarurama paHebhuroni, saka kuti kugadza Dhavhidhi kuti ave mambo vaIsiraeri vose. ndokubva, wo, zvose zvasara vaIsraeri vaiva nomwoyo mumwe, saka kuti kuita Dhavhidhi mambo.
12:39 Uye vakanga vari panzvimbo naDhavhidhi mazuva matatu, vachidya nokumwa. Nokuti hama dzavo dzakanga vagadzirira pavo.
12:40 Uyezve, vaya vaiva pedyo navo, kunyange kwalsakari, naZebhuruni, naNafutari, vaiuya, mbongoro nengamera nemanyurusi nemombe, chingwa zvokudya zvavo, nezviyo, Dried maonde, mazambiringa akaomeswa, waini, mafuta, uye nzombe namakwai, nomwoyo nezvakawanda. nokuti, kwakava mufaro muIsraeri.
13:1 Zvino Dhavhidhi akarangana tribunes, uye vezana, uye zvose vatungamiri.
13:2 Iye akati kuungano yose yaIsraeri: "Kana zvichifadza iwe, uye kana mashoko Ndinotaura zvinobva Ishe Mwari wedu, ngatitumirei shoko dzasara hama dzedu, zvose kumatunhu Israel, uye vapristi nevaRevhi vanogara Ruwa rwamaguta, saka kuti kuunganidza kwatiri.
13:3 Uye regai tidzosei areka yaMwari wedu kwatiri. Nokuti hatina kutsvaka pamazuva aSauro. "
13:4 Zvino chaunga yose akapindura kuti zvinofanira kuitwa. Nokuti shoko rakanga zvakafadza vanhu vose.
13:5 saka, Dhavhidhi akaunganidza vaIsiraeri vose, kubva paShihori irwo rukova rweEgipita, kusvikira pavanopinda paHamati, kuti vatore areka yaMwari paKiriatijearimi, akaiisa.
13:6 Dhavhidhi akakwira ana varume vose vaIsiraeri pachikomo vaKiriati-jearimi, riri muJudha, kuti auye areka yaJehovha Mwari, agere pamusoro makerubhi, apo zita rake naro.
13:7 Uye vakaisa areka yaMwari pamusoro pengoro itsva kubva paimba yaAbhinadhabhu. Ipapo Uza mukoma wake akadzinga ngoro.
13:8 Zvino Dhavhidhi zvose vaIsraeri vakanga vachiridza pamberi paMwari, nezvose zvavo kugona, nenziyo, uye nembira, uye nemitengerangwa, uye makandira, namakandira, uye nehwamanda.
13:9 Vakati vasvika paburiro raKidhoni, Uza akatambanudza ruoko rwake, kuti kutsigira areka. nokuti, nzombe kuva yokudeura akanga anaisa urerekere zvishoma.
13:10 Naizvozvo Jehovha akatsamwa Uza. Uye akamurova nokuti akanga akabata areka. Uye akafira ipapo pamberi paJehovha.
13:11 Dhavhidhi akarwadziwa zvikuru nokuti Jehovha akanga yakakamurwa Uza. Akatumidza nzvimbo iyo 'weboka Uza,'Kusvikira nhasi.
13:12 Zvino wakatya Mwari, panguva iyoyo, vachiti: "Sei ndichava kukwanisa vauyise areka yaMwari pachangu?"
13:13 Uye nokuda kwechikonzero ichi, haana kuuya amene, ndiko, muGuta raDhavhidhi. pachinzvimbo, akatsaukira mumba maObhedhi-Edhomu, muGiti.
13:14 saka, areka yaMwari agere mumba maObhedhi-Edhomu kwemwedzi mitatu. Uye Jehovha akaropafadza imba yake nezvose zvaakanga anazvo.
14:1 wo, Hiram, mambo weTire, akatuma nhume kuna Dhavhidhi, nedanda romusidhari, navapfuri vesimbi vemasvingo namatanda, kuitira kuti imba iye.
14:2 Dhavhidhi akaziva kuti Jehovha akamusimbisa kuti ave mambo waIsraeri, uye kuti umambo hwake akanga akasimudza pamusoro vanhu vake vaIsraeri.
14:3 wo, David akatora mamwe madzimai muJerusarema. Uye akazova vanakomana navanasikana.
14:4 Ndiwo mazita avo vaakaberekerwa ari muJerusarema: Shamua, naShobhabhi, Nathan naSoromoni,
14:5 Bars, naErishua, naEripereti,
14:6 uyewo naNoga, naNefegi, naJafia,
14:7 Erishama, naBheriyadha, naErifereti.
14:8 ndokubva, Paakanzwa kuti Dhavhidhi akanga azodzwa kuti ave mambo vaIsiraeri vose, zvose vaFirisitia akakwira kuitira kuti vamutsvake. Asi Dhavhidhi wakati achizvinzwa, akabuda kundosangana navo.
14:9 Zvino vaFirisitia, kusvika, vakapararira muMupata wevaRefaimu.
14:10 Uye saka Dhavhidhi akabvunza Jehovha, vachiti, "Ko ndikakwira avaFirisitia, uye achakupa kudziisa muruoko rwangu?"Zvino Jehovha akati kwaari, "Kwirai, uye ndichapa mumaoko enyu. "
14:11 Uye vakati akakwira Bhaariperazimi, Dhavhidhi akavaparadzapo, uye akati: "Mwari akaparadzanisa vavengi vangu noruoko rwangu, sezvinoita mvura zvakapatsanurwa. "Naizvozvo zita renzvimbo iyo rakanzi Bhaari-perazimi.
14:12 Uye vakasiya shure vamwari vavo panzvimbo iyoyo, uye saka Dhavhidhi akarayira kuti kupiswa.
14:13 Ndokuzo, pane imwe nguva, vaFirisitia nechisimba, uye vakapararira pamupata.
14:14 uye zvakare, David akabvunza Mwari. Zvino Mwari akati kwaari: "Hamufaniri kukwira vanovatevera. Kure navo. Uye iwe uchauya kuzorwa navo pakatarisana bharisamu miti.
14:15 Uye kana muchinzwa inzwi kusvika muna misoro barsami miti, ipapo unofanira kundorwa. Nokuti Mwari rabuda pamberi penyu, kuti ateme pasi hondo yavaFirisitia. "
14:16 saka, David akaita sezvaakanga zvarayirwa naMwari iye. Uye akauraya hondo yavaFirisitia, kubva paGibhiyoni kusvikira Gazera.
14:17 Uye zita Dhavhidhi akava anozivikanwa munyika yose kumatunhu. Uye Jehovha akaisa kumutya pamusoro pamarudzi ose.
15:1 wo, akaita dzimba oga muGuta raDhavhidhi. Uye akavaka nzvimbo areka yaMwari, akamisa tende.
15:2 Ipapo Dhavhidhi akati: "Hazvina kusiri kuti munhu kutakura areka yaMwari asi vaRevhi, uyo Jehovha akasarudza kuti kuitakura uye kushumira iye, kusvikira nokusingaperi. "
15:3 Akaunganidza vaIsraeri vose paJerusarema, saka kuti areka yaMwari kuti aiswe panzvimbo yayo, yaakanga aigadzirira.
15:4 zvechokwadi, kwaiva vaviri vanakomana vaAroni navaRevhi:
15:5 Kubva kuvanakomana vaKohati, Urieri aiva mutungamiri, nehama dzake zana namakumi maviri.
15:6 Kubva kuvanakomana vaMerari: NaAsaya aiva mutungamiri, nehama dzake dzakanga maviri namakumi maviri.
15:7 Kubva Vanakomana vaGerishomi: Joel aiva mutungamiri, nehama dzake zana namakumi matatu.
15:8 Kubva pavanakomana vaErizafani: Shemaya ndiye aiva mutungamiriri, nehama dzake vaiva mazana maviri.
15:9 Kubva Vanakomana vaHebhuroni: NaErieri aiva mutungamiri, nehama dzake vaiva makumi masere.
15:10 Kubva pavanakomana vaUzieri: WaAminadhabhu ndiye mutungamiri, nehama dzake vaiva zana negumi navaviri.
15:11 Dhavhidhi akadana vapristi, Zadhoki naAbhiatari, uye vaRevhi: Urieri, naAsaya, Joel, Shemaya, Eliel, uye Aminadhabhi.
15:12 Akati kwavari: "Imi muri vakuru hwevaRevhi mhuri, ngaritsveneswe nehama dzako, uye areka yaJehovha Mwari waIsraeri kunzvimbo yave aigadzirira.
15:13 zvimwe, sezvo akanga asati, kana Ishe akarova isu nokuti vakanga vasipo, saizvozvowo zvingava ikozvino, kana tikaita nomutemo. "
15:14 saka, vapristi navaRevhi vakanga vazvinatsa, kuitira kuti vatakure areka yaJehovha Mwari waIsraeri.
15:15 Vanakomana vaRevhi vakatakura areka yaMwari, sezvakanga Mosesi akanga akadzidziswa, maererano neshoko raJehovha, pamapfudzi avo mbariro.
15:16 Zvino Dhavhidhi wakataura kuna vakuru vavaRevhi, saka kuti kugadza, kubva kuhama dzavo, vaimbi vane zviridzwa, zvakananga, nemitengeramwa, nembira, namakandira, saka kuti Pururudzai kuti anokosha kumusoro.
15:17 Vakagadza kubva vaRevhi: Hemani, mwanakomana waJoeri; uye kubva kuhama dzake, Asafi, mwanakomana waBherekia; uye zvechokwadi, kubva kuhama dzavo, Vanakomana vaMerari: Ethan, mwanakomana waKushaya.
15:18 Uye pamwechete navo vaiva nehama dzavo rwechipiri: Zechariah, uye Ben, naJaazieri, naShemiramoti, uye Jahiel, naUni, Eriabhu, uye Bhenaya, naMaaseya, naMatitia, naEriferehu, naMikineya, Obhedhi-Edhomu, naJeyieri, vaiva vachengeti vemagedhi.
15:19 Zvino vaimbi, Hemani, Asafi, naEtani, vakanga vachiridza kubva makandira endarira.
15:20 naZekariya, naAzieri, naShemiramoti, naJehieri, naUni, Eriabhu, naMaaseya, uye Bhenaya Vaiimba zvakavanzika pamwe nemitengerangwa.
15:21 Ipapo Matitia, naEriferehu, naMikineya, naObhedhi-Edhomu, naJeyieri naAzaziya vaiimba rwiyo kukunda nembira, nokuti pasi pasi.
15:22 Now Kanania, mutungamiri vaRevhi, dzaigara pamusoro uprofita, kuti kutarawo pachine dzacho. nokuti, akanga ari nyanzvi kwazvo.
15:23 Bherekia naErikana vakanga vari vatariri vemikova yeareka.
15:24 Vapristi, Shebhanaya, naJoshafati, naNetaneri, naAmasai, naZekariya, uye Bhenaya, Eriezeri, vakanga vachiridza hwamanda pamberi peareka yaMwari. Obhedhi-Edhomu naJehiya vakanga vari vatariri vemikova yeareka.
15:25 saka, David, uye vose mukuru pakuzvarwa vaIsraeri, uye tribunes, akaenda kutakura areka yesungano yaJehovha mumba maObhedhi-Edhomu nomufaro.
15:26 Zvino Mwari wakati aibatsira vaRevhi, vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha, ivo immolated nzombe nomwe namakondobwe manomwe.
15:27 Zvino Dhavhidhi akanga akafuka nguvo yomucheka wakanaka, sezvo vose vaiva vaRevhi vakanga vakatakura areka, uye vaimbi, naKanania, mutungamiriri uprofita pakati vaimbi. Asi Dhavhidhi akanga akafuka efodhi yomucheka.
15:28 Uye vaIsraeri vose vakanga kutungamirira shure areka yesungano yaJehovha muchifarisisa, pakuudza nomubvumo panyanga, uye nehwamanda, namakandira, uye nemitengerangwa, nembira.
15:29 Zvino areka yesungano yaJehovha yakanga yasvika muGuta raDhavhidhi, Michal, mwanasikana waSauro, akanyatsomutarira napahwindo, akaona mambo Dhavhidhi achipembera nokutamba, akamushora mumoyo make.
16:1 Uye saka vakatora areka yaMwari, uye ivo vakaiisa pakati petende, iyo Dhavhidhi akanga akaidzikira. Vakabayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa pamberi paMwari.
16:2 Zvino Dhavhidhi wakati apedza kubayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa, akaropafadza vanhu nezita raJehovha.
16:3 Akagovera mumwe chete, kuvanhu kusvikira nevakadzi, mumwe monyorora chingwa, uye chidimbu zvakakangwa nyama, uye hwakatsetseka negorosi zvakakangwa nemafuta.
16:4 Akagadza vamwe vaRevhi achizondishumira pamberi peareka yaJehovha, uye kurangarira mabasa ake, uye nokukudza uye nokurumbidza Ishe, Mwari waIsraeri.
16:5 Asafi aiva mutungamiri, tevere akanga Zekariya. Pamusoro pe, paiva naJeyieri, naShemiramoti, naJehieri, naMatitia, Eriabhu, uye Bhenaya, Obhedhi-Edhomu. NaJeyieri aitarisira nhumbi nomutengeramwa uye udimbwa. Asi Asafi kwakanzwikwa nemakwakwakwa esimbi.
16:6 Zvirokwazvo, vapristi, Bhenaya naJahazieri, vaifanira kuridza hwamanda nguva dzose pamberi peareka yesungano yaJehovha.
16:7 Nezuva iro, David akaita Asafi mutungamiri, kuti kureurura kuna Jehovha nehama dzake:
16:8 "Kureurura kuna Jehovha, udane zita rake. Zivisai rinoedza ake pakati pemarudzi.
16:9 Muimbirei, uye nziyo kwaari, uye tsanangura zvishamiso zvake zvose.
16:10 Rumbidzai zita rake dzvene! Moyo yavanotsvaka Jehovha ngaifare!
16:11 Tsvakai Jehovha uye ake kunaka. Tsvakai chiso chake nguva dzose.
16:12 Rangarirai zvishamiso zvake, kwaakashandisa kwapera, zviratidzo, nezvaakatonga nomuromo wake.
16:13 O vana vaIsraeri, varanda vake! O vanakomana vaJakove, vasanangurwa vake!
16:14 Ndiye Jehovha Mwari wedu. Zvaakatonga zviri munyika yose.
16:15 Rangarirai nokusingaperi sungano yake, shoko akarayira kusvikira kumarudzi ane chiuru,
16:16 sungano yaakanga akaumba naAbhurahama, uye mhiko yake naIsaka.
16:17 Akagadza imwe kuna Jakove kuva murayiro, uye kuti Israeri ive chibvumirano husingaperi,
16:18 vachiti: 'Kwauri, Ndichapa nyika yeKenani, pamugove wenhaka yenyu. '
16:19 Panguva iyoyo, vakanga vashoma, vaiva vashoma uye vaiva navatorwa ikoko.
16:20 Zvino vakati vagura, kubva rudzi, uye kubva imwe ushe vachienda kunavamwe vanhu.
16:21 Haana kutendera munhu mhosva nhema kwavari. pachinzvimbo, akatsiura madzimambo nokuda kwavo:
16:22 'Musabata Kristu wangu. Uye regai dzinozvidza vaprofita vangu. '
16:23 Imbirai Jehovha, yose! Zivisai ruponeso rwake, kubva zuva nezuva.
16:24 Rondedzera kubwinya kwake pakati pavahedheni, zvishamiso zvake pakati pavanhu vose.
16:25 Nokuti Jehovha mukuru uye kwazvo zvinorumbidzwa. Uye Anotyisa, kupfuura vamwari vose.
16:26 Nokuti vamwari vose vendudzi zvifananidzo. Asi Ishe akaita denga.
16:27 Confession uye ukuru zviri pamberi pake. Simba nomufaro zviri panzvimbo yake.
16:28 Uyai kuna Ishe, O mhuri dzavanhu, vauye kuna Jehovha rukudzo nesimba.
16:29 Ipa mbiri kuna Ishe, kuti zita rake. Simudza chibayiro, uye nzira pamberi pake. Uye rumbidza Jehovha mutsvene kupfeka.
16:30 Ngaatorerwe yose kuzununguswa pamberi pake. Nokuti nheyo yose immoveable.
16:31 Matenga farai, uye regai nyika nomufaro. Ngavati pakati pemarudzi, 'Jehovha ushe.'
16:32 Gungwa ngaritinhire, nenhumbi dzayo plenitude. Regai minda nomufaro, nezvose zviri mazviri.
16:33 Ipapo miti yedondo kupa rumbidzo pamberi paJehovha. Nokuti anouya kuzotonga pasi.
16:34 Kureurura kuna Jehovha, nokuti akanaka. Nokuti tsitsi dzake husingaperi.
16:35 uti: 'Tiponesei, O Mwari Muponesi wedu! Uye isu unganai, uye atisunungure kubva kumarudzi, kuitira kuti kureurura zita renyu dzvene, uye anogona nomufaro nenziyo dzenyu.
16:36 Ngaarumbidzwe Ishe, Mwari waIsraeri, kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi. 'Zvino vose vanhu vanoti, 'Amen,'Uye Ngavaimbe rwiyo kuna Jehovha. "
16:37 uye saka, ipapo pamberi peareka yesungano yaJehovha, akabva Asafi nehama dzake, kuitira kuti vashumire + vari pamberi peareka nguva dzose, yose rimwe zuva, uye avo majana.
16:38 Zvino Obhedhi-Edhomu nehama dzake vaiva makumi matanhatu navasere. Akagadza Edhomu, mwanakomana waJedhutuni, naHosa kuti vave vatariri vemikova.
16:39 Asi Zadhoki mupristi, nehama dzake vapristi, vaiva pamberi petebhenekeri yaJehovha panzvimbo yakakwirira, waiva weGibhiyoni,
16:40 kuitira kuti kupa zvipiriso zvinopiswa kuna Jehovha pamusoro pearitari zvinopiswa nguva, mangwanani uye manheru, maererano nezvose zvakanyorwa mumurayiro waJehovha, izvo akarayira vaIsraeri.
16:41 Akamutevera, Hemani, naJedhutuni, uye zvakasara kwevasanangurwa, imwe neimwe zita rake, vakagadzwa kuti kureurura kuna Jehovha: "Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi."
16:42 Uyewo Hemani naJedhutuni akaridza hwamanda, ivo vakapata pamusoro makandira, uye pamusoro mumwe nomumwe mhando chiridzwa, kuti nziyo dzokurumbidza Mwari. Asi vanakomana vaJedhutuni akaita kuti vave vatariri vemikova.
16:43 Uye vanhu vose vakadzokera kudzimba dzavo, uye Dhavhidhi, kuti muropafadze imba yake zvakare.
17:1 Zvino kana Dhavhidhi aigara mumba yake, akati kumuprofita Natani: "Tarirai, Ndinogara muimba yomusidhari. Asi areka yesungano yaJehovha iri pasi peTende matehwe. "
17:2 Zvino Natani akati kuna Dhavhidhi: "Itai zvose zviri mumwoyo menyu. Nokuti Mwari anemi. "
17:3 asi, ihwohwo shoko raMwari rakasvika kuna Natani, vachiti:
17:4 "Enda, uye taura muranda wangu Dhavhidhi: Zvanzi naJehovha: Hamufaniri imba yangu ive ugaro.
17:5 Nokuti handina akagara mumba kubvira panguva apo andakararama kubuda Israel, kusvikira nhasi. pachinzvimbo, Ndave dzose kuchinja nzvimbo, mune imwe tebhenekeri uye tende,
17:6 kugara vose vaIsraeri. Rini nokusingaperi ndinotaura munhu zvachose, pakati vatongi vaIsraeri vandakarayira akaisa anotarisira kuitira kuti kumafuro vanhu vangu, vachiti: 'Nei usina imba yomusidhari kwandiri?'
17:7 uye saka, zvino iwe ltiyi kumushumiri wangu Dhavhidhi: Zvanzi naJehovha wehondo: Ndanokutora pawakanga makwai ari pamafuro, kuitira kuti ave mutungamiri wavanhu vangu Israeri.
17:8 Ndikava newe pose pawakafamba. Uye ndauraya vavengi vako vose pamberi pako, uye ndaita zita kwamuri somunhu mukuru vaya anopembererwa panyika.
17:9 Uye ndakaisa nzvimbo vanhu vangu Israeri. Vanofanira kudyarwa, vachararama mairi, uye vanofanira isisina kuzununguswa. Kana vanakomana zvakaipa kudzipfeka kure, sezvo pakutanga,
17:10 kubvira pamazuva kana ndakapa vatongi vanhu vangu Israeri, uye ini akaninipisa vavengi vako vose. saka, Wandinokuparidzirai kuti Ishe imba imi.
17:11 Uye kana wapedza mazuva ako, saka kuti iwe enda madzibaba enyu, Ndichamutsa mwana wako anokutevera, uyo uchava kubva kuvanakomana vako. Uye ndichasimbisa ushe hwake.
17:12 Iye anofanira imba ini, uye ndichaita kuti vakasimba chake choushe, kusvikira pakusingaperi.
17:13 Ini ndichava baba vake, uye iye achava mwanakomana wangu. Uye handidi kutora yangu tsitsi naye, sezvandakadzibvisa kubva uyo usati.
17:14 Ndichamufukidza chiteshi mumba mangu uye umambo hwangu, kunyange nokusingaperi. Uye chigaro chake choumambo kuchava yakasimba chaizvo, nekusingaperi. "
17:15 Maererano nemashoko aya ose, uye maererano ichi rose zvaakaratidzwa, saka haana Natani akaudza Dhavhidhi.
17:16 Zvino mambo Dhavhidhi wakati abva, uye akanga agere pasi pamberi paJehovha, akati: "Ndini ani, O Ishe Mwari, uye imba yangu chii, kuti mubvumire zvinhu zvakadai kwandiri?
17:17 Asi kunyange izvi zvaiita zvishoma pamberi penyu, uye saka mataurazve pamusoro peimba yomuranda wenyu kusvikira ramangwana. Uye makandiita chiseko pamusoro vose, O Ishe Mwari.
17:18 Chii Dhavhidhi angawedzereizve, sezvo uine saka vakakudza mushandi wenyu, uye kumuziva?
17:19 O Ishe, nokuda komuranda wenyu, maererano mwoyo wako, Mauya pamusoro zvose kunoshamisira ichi, uye iwe atema zvose izvi zvikuru zvose kuzivikanwa.
17:20 O Ishe, hakuna mumwe akafanana nemi. Uye hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu, kubva zvose uyo zvatakanzwa nezvazvo nenzeve dzedu.
17:21 Ndezvipi zvimwe rudzi chete panyika rwakafanana navanhu venyu vaIsraeri, uyo Mwari akatambanudza, kuti kuvasunungura, uye kuti aite vanhu pachake, uye ukuru hwake uye zvikuru ndudzi pamberi avo vaakanga vasunungurwa kubva kuIjipiti?
17:22 Uye iwe Makaisa vanhu venyu vaIsraeri kuti vave vanhu venyu, kusvikira pakusingaperi. Uye newe, O Ishe, mava Mwari wavo.
17:23 Naizvozvo ikozvino, O Ishe, regai shoko ramakataura kumuranda wenyu, uye pamusoro peimba yake, risimbiswe zvachose, uye itai sezvinoita rawareva.
17:24 Uye zita renyu kuramba uye ngaakudzwe kunyange nguva dzose. Uye regai vati: 'Jehovha Wamasimba Ose ndiye Mwari weIsraeri. Uye imba yaDhavhidhi muranda wake unogara nokusingaperi pamberi pake. '
17:25 Zvako, O Ishe Mwari wangu, kwakaratidza kuti nzeve yomuranda wenyu kuti iwe uchava imba iye. Uye saka muranda wenyu awana kutenda aigona kunyengetera kuti pamberi penyu.
17:26 zvino, O Ishe, muri Mwari. Uye ramakataura kumuranda wenyu kudaro mako-.
17:27 Uye makatanga muropafadze imba yomuranda wenyu, kuitira kuti nguva dzose pamberi penyu. Nokuti sezvo imi ndiye chikomborero, O Ishe, icharopafadzwa nokusingaperi. "
18:1 Zvino pashure pezvinhu izvi, zvakaitika kuti Dhavhidhi akaparadza vaFiristia, iye kuzvininipisa navo, uye akatora Gati navanasikana varo pamaoko avaFirisitia.
18:2 Akakunda Moabhuwo. Zvino vaMoabhu vakava varanda vaDhavhidhi, kupa zvipo kwaari.
18:3 In iyoyo, Dhavhidhi akakundawo Hadhadhezeri, mambo weZobha, mudunhu yeHamati, Wakati achibudira kuitira kuti vawedzere hwake kusvikira kurwizi rwaYufratesi.
18:4 Ipapo Dhavhidhi akabata chimwe chiuru ake mana bhiza ngoro, navatasvi vamabhiza vane zviuru zvinomwe, uye varume zviuru makumi maviri vaifamba netsoka. Zvino marunda ose engoro, kunze mana-bhiza ngoro imwe zana, raakanga kwakachengeterwa pachake.
18:5 Zvino vaSiria veDhamasiko wo vasvika, kuitira kuti kupa rubatsiro kuna Hadhadhezeri, mambo weZobha. uye saka, Dhavhidhi akauraya pakati pavo makumi maviri varume zviuru.
18:6 Uye Akaisa varwi muDhamasiko, saka kuti Siriya ichowo kumushumira, uye vakaramba zvipo. Uye Ishe aibatsira kwaari zvose kuti wakabuda.
18:7 wo, Dhavhidhi akatora yendarama magoba, izvo varanda vaHadhadhezeri, akadziisa Jerusaremu.
18:8 Pamusoro pe, NapaTibhati nokuKuni, maguta eHadharezeri, Akauya ndarira zhinji kwazvo, kubva Soromoni akaita gungwa nendarira, uye mbiru, nemidziyo yendarira.
18:9 Zvino kana Toi, Mambo weHamati, akanga anzwa izvi, zvakananga kuti Dhavhidhi akanga auraya uto rose yaHadhadhezeri, mambo weZobha,
18:10 akatuma mwanakomana wake Hadhorami kuna mambo Dhavhidhi kuti kukumbira rugare kwaari, uye angangokupa kundomukwazisa kuitira kuti kuti akanga auraya uye akarwisa Hadhadhezeri. nokuti, Toi akarwa Hadhadhezeri.
18:11 Uyezve, zvose midziyo yendarama nesirivha nendarira mambo Dhavhidhi vatsvene Ishe, pamwechete nesirivha nendarama yaakanga atora kundudzi dzose, zvakawanda kubva Idhumea, uye Moabhi, uye vanakomana vaAmoni, sezvo vaFirisitia navaAmareki.
18:12 Zvirokwazvo, Abhishai, mwanakomana waZeruya, akauraya zviuru gumi nezvisere vaEdhomu paMupata woMunyu.
18:13 Zvino akamisa ravarwi muEdhomu, saka kuti Idhumea aizoshumira David. Uye Jehovha akaponesa Dhavhidhi zvose kuti wakabuda.
18:14 saka, Dhavhidhi akabata vaIsiraeri vose, akatongera zvakarurama pakati vanhu vake vose.
18:15 zvino Joabhu, mwanakomana waZeruya, aitarisira uto, uye Jehoshafati, mwanakomana waAhirudhi, waiva sahwira.
18:16 And Zadhoki, mwanakomana waAhitubhi, naAhimereki, mwanakomana waAbhiyatari, vaiva vapristi. NaShavhisha waiva munyori.
18:17 wo, Bhenaya, mwanakomana waJehoyadha, aitarisira mapoka makumi vaKereti navaPereti. Asi vanakomana vaDhavhidhi vaiva vokutanga paruoko rwamambo.
19:1 Zvino Nahashi, Mambo wavana vaAmoni, akafa, uye mwanakomana wake akabata ushe panzvimbo yake.
19:2 Dhavhidhi akati: "Ini achaita netsitsi Hanuni, mwanakomana waNahashi. Nokuti baba vake nyasha kwandiri. "Naizvozvo Dhavhidhi akatuma nhume kumubata ruoko pamusoro pokufa kwababa vake. Asi kana vasvika munyika yevanakomana vaAmoni, saka kuti vavanyaradze Hanuni,
19:3 vatungamiriri vanakomana vaAmoni akati kuna Hanuni: "Munofunga kuti zvichida David avatuma kunyaradza iwe kuti kukudza baba vako? Hauna akacherechedza kuti varanda vake vakasvika kwauri kuitira kuti kuongorora, uye kuongorora, uye ongorora nyika yenyu?"
19:4 Uye saka Hanuni kuveura misoro uye ndebvu vavaranda vaDhavhidhi, uye akacheka kure majasi avo kubva magaro kusvika kutsoka, akavarega vachienda.
19:5 Vakati vaenda, uye akanga atuma shoko kuna Dhavhidhi, (nokuti vakanga atambura Zvinonyadzisa zvikuru,) akatuma vanhu kundosangana navo, uye akavarayira kuti varege kuramba paJeriko kusvikira ndebvu dzavo akakura, uye ipapo vanofanira kudzokera.
19:6 ndokubva, kana vanakomana vaAmoni vakaona kuti vakanga vaita zvinokuvadza pamusoro David, zvose Hanuni vamwe vanhu vakatuma matarenda ane chiuru chimwe chesirivha, saka kuti vabhadhare ngoro navatasvi vamabhiza vanobva Mesopotamia, uye kubva reSiriya naMaaka, nokuZobha.
19:7 Vakaripira ngoro zviuru makumi matatu nezviviri, namambo weMaaka nevanhu vake. Zvino ava vakanga vasvika, vakaita musasa munzvimbo pakatarisana peMedhebha. wo, vanakomana vaAmoni, kuunganidza kubva kumaguta avo, akaenda kuhondo.
19:8 Zvino Dhavhidhi wakati anzwa izvi, akatuma Joabhu nehondo yose vakasimba.
19:9 Uye vanakomana vaAmoni, kubuda, akamisa yokurwira pamberi pasuwo reguta. Asi madzimambo, akanga auya kwavo rubatsiro akamira oga mumunda.
19:10 Uye saka Joabhu, kunzwisisa hondo munouisa kutarisana naye uye shure kwake, akasarudza varume vane simba vose vaIsraeri, uye akabuda kuzorwa navaSiria.
19:11 iye asi mugove vasara vanhu wakaiswa pasi noruoko paAbhishai. Uye vakabuda kundorwa navana vaAmoni.
19:12 Akati: "Kana vaSiriya kuikunda pangu, munofanira kuva rubatsiro kwandiri. Asi kana vanakomana vaAmoni kuikunda iwe, Ini ndichava dziviriro kwamuri.
19:13 kusimbiswa, uye regai tiite manfully akamirira vanhu vedu, uye nokuda kwemaguta aMwari wedu. Uye Jehovha achaita zvakanaka mumaonero ake. "
19:14 saka, Joabhu, uye vanhu vaaiva navo, vakabuda kuzorwa navaSiria. Akaaisa kutiza.
19:15 Zvino vana vaAmoni, vachiona kuti vaSiria vatiza, pachavo akatiza Abhishai, mukoma wake, uye vakapinda muguta. Zvino Joabhu akadzokera kuJerusarema.
19:16 Asi vaSiria, achiona kuti vakanga vaurayiwa pamberi pavaIsiraeri, akatuma nhume, uye vakauya vaSiriya vaiva mhiri kworwizi. And Shofaki, mutungamiri wehondo yaHadhadhezeri, aiva mukuru wavo.
19:17 Kana uyu akanga vakaudza Dhavhidhi, Akaunganidza vaIsraeri, uye iye akayambuka Jorodhani. Zvino vakamhanya vakananga kwavari. Zvino akamisa yokurwira nazvo. Uye ivo vakarwa naye.
19:18 Asi vaSiriya vakatiza kubva Israel. Uye Dhavhidhi akauraya vaSiria vengoro zviuru zvinomwe, uye mana varume zviuru netsoka, uye Shofaki, mutungamiriri weuto.
19:19 Zvino varanda vaHadharezeri, kuona pachavo kuti tikurirwe Israel, vakayambukira David, vakashumira naye. Uye Siria akanga asisiri kuda kupa rubatsiro vana vaAmoni.
20:1 Zvino kuti, mushure kosi gore, panguva apo madzimambo kazhinji kuenda kuhondo, Joabhu akaunganidza hondo nemasoja ruzivo, iye dongo kunyika yavana vaAmoni. Akaramba uye vakakombawo Rabha. Asi Dhavhidhi akanga achigara muJerusarema apo Joabhu akakunda Rabha akariputsa.
20:2 Ipapo Dhavhidhi akatora korona naMirikomi kubva mumusoro wake, uye akawana mairi kurema rimwe rendarama, uye rinokosha chaizvo anokosha. Iye agadzira korona nawo. wo, akatora zvikuru zvakapambwa muguta, zvakanga zvakawanda kwazvo.
20:3 Ipapo akaenda navanhu vakanga varimo. Uye akaita magejo, uye sleds, uye ngoro dzesimbi kuenda pamusoro pavo, zvokuti vakanga vhuna nowakapwanyika. Naizvozvo Dhavhidhi kubata maguta ose evanakomana vaAmoni. Uye akadzokera navo vose vanhu vake kuJerusarema.
20:4 Shure kwezvinhu izvi, hondo yakanga yatanga paGezeri navaFirisitia, umo Sibhekai muHushati akauraya Sipai kubva nhangemutange wevaRefaimu, iye kuzvininipisa navo.
20:5 wo, mumwe hondo yakanga ashandiswe navaFirisitia, umo Adeodatus, mwanakomana yomudondo, mumwe wokuBheterehema, akarova munin'ina waGoriati muGiti, huni aiva nepfumo raiva rakaita nedanda romuruki.
20:6 Zvadaro zvakare, imwe hondo yakaitika paGati, umo maiva murume wakareba kwazvo, kuva digits nhanhatu, ndiko, zvose pamwe chete makumi maviri nezvina. Uyu murume zvakare akazvarwa kubva ndiri wevaRefaimu.
20:7 He vakamhura Israel. And Jonathan, mwanakomana waShimea, munin'ina waDhavhidhi, akamurova. Ndivo vanakomana wevaRefaimu paGati, uyo vakaurawa naDhavhidhi nevashandi vake.
21:1 Zvino Satani akasimuka Israeri, uye akakurudzira Dhavhidhi kuti aizova averenge vaIsraeri.
21:2 Zvino Dhavhidhi akati kuna Joabhu navatungamiri vavanhu: "Enda, uye nhamba Israel, kubva paBheerishebha kusvikira paDhani. Muuye kwandiri nhamba, kuti ndigone kuzviziva. "
21:3 Joabhu akapindura: "Dai Jehovha awedzere vanhu vake kupfuura zvadziri kane zana. asi, ishe wangu mambo, havazi varanda venyu vose? Seiko ishe wangu vaizotsvaka ichi chinhu, izvo zvinogona kunzi ave chivi kuna Israeri?"
21:4 Asi shoko ramambo rakakurira pachinzvimbo. Ipapo Joabhu akaenda, uye akafamba kumativi, kuburikidza zvose vaIsraeri. Uye akadzokera kuJerusarema.
21:5 Uye akapa Dhavhidhi nhamba yevaya waakanga vakaongororwa. Uye yose nhamba yaIsraeri akawanikwa varume miriyoni imwe uye chimwe namazana vaigona bakatwa; asi kuna Judha, vakasvika zviuru zvina mazana manomwe navarwi.
21:6 Asi vaRevhi navaBhenjamini haana nhamba. Nekuti Joabhu waibata mirairo mambo ndisingadi.
21:7 Zvino Mwari akanga asingafari nezvakanga zvataurwa arayira, naizvozvo akarova Israeri.
21:8 Zvino Dhavhidhi akati kuna Mwari: "Ndatadza zvikuru pakuita izvi. Ndinokukumbirai abvise yomuranda wenyu zvakaipa. Nokuti ndakaita nokusachenjera. "
21:9 Uye Jehovha akataura naGadhi, muoni waDhavhidhi, vachiti:
21:10 "Enda, uye taura kuna Dhavhidhi, uye kumuudza: Zvanzi naJehovha: Ndinokupai pfungwa zvinhu zvitatu. Sarudza chimwe chete kuti uchada, uye ndichazviita kwauri. "
21:11 Zvino Gadhi aenda kuna Dhavhidhi, akati kwaari: "Zvanzi naJehovha: Sarudzai chii uchada:
21:12 Kana makore matatu enzara, kana mwedzi mitatu kuti kutiza vavengi venyu, havakwanisi kutiza kubva pamunondo yavo, kana mazuva matatu kuti munondo waJehovha uye denda kutendeuka mukati nyika, nomutumwa waShe kuuraya ose chikamu Israel. Naizvozvo ikozvino, ona kuti ndinofanira kupindura iye akandituma. "
21:13 Ipapo Dhavhidhi akati kuna Gadhi: "Pane zvinetso kudzvanya pamusoro pangu kubva kumativi ose. Asi zviri nani kwandiri kuti kuwira mumaoko aIshe, nokuti ngoni dzake dziri zhinji, pane mumaoko evanhu. "
21:14 saka, Jehovha akatuma denda pakati paIsiraeri. Uye kwakawa Israeri varume zviuru makumi manomwe.
21:15 wo, akatuma mutumwa Jerusaremu, kuti ateme nayo. Uye paakanga achirova, Ishe akaona uye akatora tsitsi pamusoro kwakakura kukuvadza. Akaraira Angel akanga achiuraya: "Zvaringana. Zvino regai ruoko rwenyu rimire. "Mutumwa waJehovha akanga amire parutivi paburiro raOrinani muJebhusi.
21:16 And David, Ndokusimudzira meso ake, akaona mutumwa waJehovha, amire pakati pedenga nenyika ine munondo wakavhomorwa muruoko rwake, akatendeuka kuJerusarema. Uye iye nevakange mukuru pakuzvarwa, zvikadaro mu masaga, akawira asingatani pasi.
21:17 Zvino Dhavhidhi akati kuna Mwari: "Handisi munhu akarayira kuti vanhu vaverengwe? Ndini ndakatadza; ndini vakaita zvakaipa. boka iri, chii rinokuyeuchidza kukodzera? O Ishe Mwari wangu, Ndinokumbira kuti ruoko rwenyu ngavadzoserwe kuzorwa neni uye neimba yababa vangu. Asi ngaarege vanhu venyu abayiwe. "
21:18 Ipapo mutumwa waJehovha akarayira Gadhi kuti audze Dhavhidhi kuti kukwira uye kuvaka atari yaJehovha Mwari paburiro raOrinani muJebhusi.
21:19 saka, David akakwira, maererano neshoko naGadhi, aakataura kwaari muzita raIshe.
21:20 Zvino apo Orinani akanga akatarira uye waona Angel, iye navanakomana vake vana vakavanda. Nokuti panguva iyoyo, akanga achipura gorosi pamusoro paburiro.
21:21 ndokubva, sezvo Dhavhidhi akanga kusvika Orinani, Orinani akamuona, uye akabuda paburiro kundosangana naye. Iye vaitya iye anongoti pasi.
21:22 Zvino Dhavhidhi akati kwaari: "Ipa nzvimbo iyi paburiro rako kwandiri, I kuitira kuti atari yaJehovha pamusoro payo. Unofanira kubvuma kwandiri zvikuru mari sezvo zvakakodzera, kuti denda zvigume kubva kuvanhu. "
21:23 Asi Orinani akati kuna Dhavhidhi: "Torai mudye, uye dai ishe wangu, mambo aite zvose zvinomufadza. Uyezve, Ndinokupai nzombe sokuparadzanya, uye gejo huni, nezviyo chive chibayiro. Ini ichapa zvose pachena. "
21:24 Mambo Dhavhidhi akati kwaari: "Hapana nzira ichava zvakadaro. pachinzvimbo, Ndichakupa mari kwamuri, sezviri zvakakodzera. Ndinofanira kutora kure, uye nokudaro zvipiriso kuna Jehovha zvinopiswa kuti arasikirwe chinhu. "
21:25 saka, David akapa Orinani, nokuti nzvimbo, kwazvo chete kurema mashekeri mazana matanhatu endarama.
21:26 Uye akavaka aritari kuna Jehovha ipapo. Uye akapa zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa, akadana pamusoro Ishe. Iye akateerera achituma moto kubva kudenga pamusoro pearitari chinopiswa.
21:27 Uye Jehovha akarayira kuti Angel, akatsaukira munondo wake mumuhara wawo.
21:28 ndokubva, vachiona kuti Ishe akanga akateerera iye ari paburiro raOrinani muJebhusi, David pakarepo immolated vawirwa ikoko.
21:29 Asi tende Ishe, yakanga yavakwa naMozisi murenje, nearitari zvinopiswa, panguva iyoyo zviri panzvimbo yakakwirira Gibhiyoni.
21:30 Zvino Dhavhidhi akanga asingakwanisi kuenda kuaritari, kuti anyengetere kuna Mwari pane. Nokuti akanga auraya ane kutya kwazvo, kuona munondo Mutumwa waJehovha.
22:1 Dhavhidhi akati, "Iyi ndiyo imba yaMwari, uye ichi ndicho aritari nokuda chinopiswa yaIsraeri. "
22:2 Uye akavarayira kuti kuunganidza zvose vatsva kubva kunyika yaIsraeri. Uye kubva izvi akagadza stoneworkers, kuti vaveze matombo uye kuti rodzai navo, kuti imba yaMwari.
22:3 wo, Dhavhidhi akagadzirawo matare kwazvo kushandisa kuti zvipikiri pamasuwo, uye nokuda vazvo uye mapfundo, uyewo dzinozviitikira kurema kwendarira.
22:4 wo, nedanda miti, izvo vaSidhoni nevaTire vakanga zvifambiswe kuna Dhavhidhi, vakanga vasingagoni kuverengwa.
22:5 Dhavhidhi akati: "Mwanakomana wangu Soromoni muduku uye nyoro mukomana. Asi imba ndinoda ichavakirwa Jehovha vanofanira kuva zvikuru kuti mukurumbira munharaunda dzose. saka, Ndichaita kugadzirira chii chichava zvakafanira kwaari. "Uye nokuda kwechikonzero ichi, asati afa, akagadzira zvose zvinodiwa.
22:6 Ipapo akadana Soromoni, mwanakomana wake. Uye akarayira kuti imba yaJehovha, Mwari waIsraeri.
22:7 Zvino Dhavhidhi akati kuna Soromoni: "Mwanakomana wangu, zvakanga kuda kwangu ini imba zita raJehovha Mwari wangu.
22:8 Asi shoko raJehovha rakasvika kwandiri, vachiti: 'Iwe wakateura ropa rakawanda, uye imi vakarwa muhondo dzakawanda. Iwe havagoni imba zita rangu, zvikuru yaiva kuteura ropa pamberi pangu.
22:9 Mwanakomana uchazozvarwa kuti uchava munhu akanyarara chaizvo. Nokuti Ndichaita kuti zororo pavavengi vake vose vari kumativi ose. Uye nokuda kwechikonzero ichi, uchanzi Rugare. Uye ndichapa rugare norunyararo Israeri mazuva ake ose.
22:10 Iye achavakira zita rangu imba. Uye iye achava mwanakomana wangu, uye ini ndichava baba vake. Uye ndichasimbisa chigaro choumambo hwake muIsraeri nokusingaperi.
22:11 zvino, Mwanakomana wangu, Jehovha ngaave newe, uye dai iwe ubudirire uye imba yaJehovha Mwari wako, sezvaakataura pamusoro pako.
22:12 wo, Ishe ngaakupe kungwara nokunzwisisa, kuti mukwanise kutonga Israeri uye kuti urinde murayiro waJehovha Mwari wako.
22:13 Nokuti ipapo iwe uchagona mberi, kana ukachengeta mirayiro uye zvakatongwa kuti Jehovha akarayira Mozisi kuti adzidzise kuvaIsraeri. Iva zvakasimbisa uye kuita manfully. Haufaniri kutya, uye haufaniri kutya.
22:14 tarirai, muurombo yangu Ndagadzira mari nokuda imba yaJehovha: matarenda ane zviuru zvine zana zvendarama, uye miriyoni imwe matarenda esirivha. Asi zvechokwadi, hakuna kuyera nendarira nedare. Nokuti nokukura kwavo mhiri vaverengwa. Uye ndakagadzirira matanda nematombo, nokuti basa racho.
22:15 wo, une nyanzvi dzokugadzira zhinji kwazvo: stoneworkers, nevavaki vemasvingo, uye mhizha huni, uye avo zvikuru akangwara pakuita basa ose unyanzvi,
22:16 nendarama nesirivha, uye nendarira nedare, izvo hapana nhamba. saka, simuka chiito. Uye Jehovha achava nemi. "
22:17 wo, David akarayira vatungamiri vose veIsraeri, kuti vaizova kubatsira mwanakomana wake Soromoni,
22:18 vachiti: "Imi kunzwisisa kuti Jehovha Mwari wako unewe, uye kuti iye akuzorodza kumativi ose, uye kuti iye wakaisa vavengi venyu vose mumaoko ako, uye kuti nyika yakundwa pamberi paJehovha napamberi pavanhu vake.
22:19 saka, kupa mwoyo yenyu uye nemweya yenyu, saka kuti iwe vatsvake Ishe Mwari wako. Uye tivake tsvene kuna Jehovha Mwari, saka kuti areka yesungano yaJehovha, uye midziyo vatsvene kuna Jehovha, anogona kuiswa mumba kuti kuvakirwa zita raJehovha. "
23:1 Ipapo David, akwegura, azara nemazuva, akagadza mwanakomana wake Soromoni kuti ave mambo waIsraeri.
23:2 Ipapo akaunganidza veIsraeri, vapristi uyewo vaRevhi.
23:3 VaRevhi vakaverengwa vanamakore makumi matatu navakapfuura. Uye vakawana imomo varume zviuru makumi matatu nezvisere.
23:4 Of izvi, zviuru makumi maviri nezvina vakasarudzwa uye yakagoverwa kuna ushumiri reimba yaJehovha. Ipapo zviuru zvitanhatu vaiva vatariri navatongi.
23:5 Uyezve, zviuru zvina vaiva vatariri vemikova. Uye zvakafanana nhamba vaiva vaimbi remapisarema kuna Ishe, vane zviridzwa yaakavaka nokuda mumhanzi.
23:6 Dhavhidhi avaisa mapoka akaenzana navanakomana vaRevhi, zvakananga, Gerishomi, naKohati, naMerari.
23:7 Vanakomana vaGerishomi: Radhani naShimei.
23:8 Vanakomana vaRadhani: mutungamiriri Jahiel, naZerami, uye Joel, tatu.
23:9 Vanakomana vaShimei: Sheromoti, naHazieri, uye Harani, tatu. Ndivo vakanga vari vakuru vedzimba dzamadzibaba aRadhani.
23:10 Ipapo vanakomana vaShimei: Jahati, uye Azizah, Jeushi, naBheriya. Ndivo vanakomana vaShimei, mana.
23:11 Zvino Jahati akanga chokutanga, Azizah wechipiri, asi Jeushi naBheriya vakanga vasina vanakomana vazhinji, uye nokuda kwechikonzero ichi vakanga sezvirongo imwe mhuri uye imwe imba.
23:12 Vanakomana vaKohati: Amuramu naIzhari, Hebhuroni naUzieri, mana.
23:13 Vanakomana vaAmirami: Aroni naMosesi. Zvino Aroni akatsaurwa kuitira kuti vashumire tsvene, iye navanakomana vake nokusingaperi, uye kuti apise zvinonhuhwira kuna Ishe, maererano setsika yake, uye kuti varopafadze zita rake zvachose.
23:14 Vanakomana vaMozisi, munhu waMwari, vakanga vakaverengwa kurudzi rwaRevhi.
23:15 Vanakomana vaMozisi: Gerishomi naEriezeri.
23:16 Vanakomana vaGerishomi: Shebhueri rokutanga.
23:17 Zvino Vanakomana vaEriezeri: Rehabhia vokutanga. Uye pakanga pasina vamwe vanakomana Eriezeri. Asi vanakomana vaRehabhia vakanga vakawanda kwazvo.
23:18 Vanakomana vaIzhari: Sheromiti rokutanga.
23:19 Vanakomana vaHebhuroni: Jeria mukuru, NaAmaria wechipiri, Jahazieri wechitatu, Jekameami wechina.
23:20 Vanakomana vaUzieri: Mika wokutanga, NaIshia wechipiri.
23:21 Vanakomana vaMerari: Mari naMushi. Vanakomana vaMari: Eriazari naKishi.
23:22 Ipapo Ereazari akafa, uye akanga asina vanakomana, asi vanasikana chete. Uye saka vanakomana vaKishi, hama dzavo, akaroora navo.
23:23 Vanakomana vaMushi: Mari, naEdheri, naJeremoti, tatu.
23:24 Ndivo vanakomana vaRevhi, dzavo pehama uye mhuri, Vatungamiriri vachichinjana, uye uwandu nerimwe misoro vaiita mabasa ushumiri imba yaJehovha, ana makore zvichikwira.
23:25 For David akati: "Ishe, Mwari waIsraeri, wakazorodza vanhu vake, uye ugaro muJerusarema kusvikira pakusingaperi.
23:26 Hazvingagamuchirwi kuva hofisi vaRevhi zvakare kutakura tabhenakeri nenhumbi dzayo dzose kushandiswa muushumiri. "
23:27 wo, maererano okupedzisira Zvinorairwa David, Vanakomana vaRevhi Achanzi vakaverengwa kubvira maviri makore zvichikwira.
23:28 Vachava atarirwe vanakomana vaAroni, achitarisirwa reimba yaJehovha, mu kumusuwo, napamakamuri, uye panzvimbo yokuzvinatsa, uye panzvimbo tsvene, uye zvose nemabasa ushumiri temberi yaJehovha.
23:29 Asi vapristi ichava pamusoro chingwa kuvapo, uye chibayiro hwakatsetseka gorosi, nezvingwa zvisina kuviriswa, uye chakabikwa pani, uye roasting, uye pamusoro mumwe nomumwe uremu uye chiyero.
23:30 Asi zvechokwadi, VaRevhi vanofanira kumira kureurura uye kuimbira Jehovha, pamangwanani, uye yakafanana manheru,
23:31 sezvo zvikuru nechipo zvinopiswa yaJehovha, sezvo ari maSabata uye kwomwedzi uye zvimwe remitambo, maererano nokuwanda uye nemirau chimwe nechimwe nyaya, kuchingobvambura pamberi paJehovha.
23:32 Ngavatsvake kuchengeta pakuchengeta tabhenakeri yesungano, uye tsika tsvene, uye kuchengetwa vanakomana vaAroni, hama dzavo, kuti dzikushumire mumba yaJehovha.
24:1 Zvino izvi mapoka avanakomana vaAroni. Vanakomana vaAroni: Nadhabhi, naAbhihu, Eriazari, naItamari.
24:2 Asi Nadhabhi naAbhihu vakafa pamberi baba vavo, uye pasina vana. Uye saka Ereazari naItamari vakashumira pabasa roupristi.
24:3 Dhavhidhi avaisa, ndiko, NaZadhoki, mumwe wavanakomana vaEriazari, naAhimereki, mumwe wavanakomana vaItamari, namapoka avo uye ushumiri.
24:4 Uye vakawanikwapo vazhinji pakati pavanakomana vaEriazari pakati varume vaitungamirira, kupfuura pakati pavanakomana vaItamari. saka, akakamura kwavari kuitira kuti paiva, pakati pavanakomana vaEriazari, gumi Vatungamiriri nemhuri dzavo, uye pavanakomana vaItamari vasere nemhuri dzavo uye nedzimba.
24:5 Zvino akakamura pakati pavo, mune zvose mhuri, nemijenya. Nokuti kwaiva vatungamiriri tsvene uye vatungamiriri vaMwari, zvakawanda kubva pavanakomana vaEriazari sezvo kubva pavanakomana vaItamari.
24:6 Zvino munyori Shemaya, mwanakomana waNetaneri, muRevhi, akanyora izvi pasi pamberi pamambo uye vatungamiriri, pamwechete naZadhoki, mupristi, naAhimereki, mwanakomana waAbhiyatari, uyewo vatungamiriri evapristi uye vaRevhi mhuri. Uye kwakanga imba imwe, wakange mukuru pamusoro vamwe, kuti waEreazari; uye kwakanga imwe imba, wakange vamwe pasi payo, kuti vaItamari.
24:7 Zvino mujenya wokutanga akaenda Jehoyaribi, wechipiri Jedheiya,
24:8 wechitatu Harimi, wechina Seorimi,
24:9 wechishanu Marikiya, wetanhatu Miyamini,
24:10 wechinomwe Hakozi, wechisere Abhija,
24:11 wepfumbamwe Jeshua, wegumi Shekania,
24:12 wegumi nomumwe Eriashibhi, wegumi nemiviri Jakimi,
24:13 wegumi nemitatu Hupa, wegumi nemina Jeshebhiyabhi,
24:14 wegumi nemishanu Bhiriga, Imeri,
24:15 wegumi neminomwe Heziri, Hapizezi,
24:16 wegumi nemipfumbamwe Petahia, wamakumi maviri Jehezekeri,
24:17 maviri Jakini, maviri nemiviri Gamuri,
24:18 maviri Dheraya, maviri namana kuna naMaazia.
24:19 Ndivo pamapoka avo maererano mushumiro dzavo, vangadai kuitira kuti apinde muimba yaJehovha maererano kwavo netsika, pasi noruoko Aaron, baba vavo, sezvo Ishe, Mwari waIsraeri, akanga adzidziswa.
24:20 Zvino vanakomana vaRevhi vakanga vasara, paiva Shubhaeri, kubva vanakomana vaAmirami, uye Jedheya, kubva kuvanakomana vaShubhaeri.
24:21 wo, paiva Ishia, Mutungamiri kubva vanakomana vaRehabhia,
24:22 uye zvechokwadi Sheromoti, mwanakomana waIzari, Jahati, mwanakomana Sheromoti,
24:23 uye mwanakomana wake, Jeria mukuru, NaAmaria wechipiri, Jahazieri wechitatu, Jekameami wechina.
24:24 The mwanakomana waUzieri Mika. Mwanakomana waMika Shamiri.
24:25 Munin'ina waMika: Ishia. Uye mwanakomana Ishia aiva Zechariah.
24:26 Vanakomana vaMerari vaiva Mari naMushi. Mwanakomana waUziya akanga Bheno.
24:27 wo, mwanakomana vaMerari: Uziya, naShohami, naZakuri, uye Hebri.
24:28 Pamusoro pe, mwanakomana waMari Ereazari, wakange asina vana.
24:29 Zvirokwazvo, mwanakomana waKishi Jerameeri.
24:30 Vanakomana vaMushi vaiva Mari, naEdheri, naJerimoti. Ndivo vanakomana vaRevhi maererano nedzimba dzavo.
24:31 Ivo mijenya pamusoro hama dzavo, vanakomana vaAroni, pamberi pamambo Dhavhidhi, naZadhoki, naAhimereki, uye vatungamiri evapristi uye vaRevhi mhuri, sezvo zvikuru pamusoro mukuru somuduku. Mugove yakakamurwa zvose zvinhu zvakaenzana.
25:1 Ipapo Dhavhidhi vatongi vehondo vakatsaurirawo, ushumiri, vanakomana vaAsafi, naHemani, naJedhutuni, kuti vaporofite nembira, nemitengeramwa, namakandira, maererano nokuwanda, ndapera chakatsaurirwa pabasa ravo yakatarwa.
25:2 Kubva kuvanakomana vaAsafi: naZakuri, uye Joseph, naNetania, naAsharera, vanakomana vaAsafi, pasi poruoko naAsafi, kuprofita pedyo namambo.
25:3 Zvino naJedhutuni, vanakomana vaJedhutuni: Gedharia, naZeri, Jeshaya, naHashabhiya, naMatitia, nhanhatu, pasi ruoko nababa vavo Jedhutuni, akanga achiprofita nemitengeramwa, apo ndichireurura nokurumbidza Ishe.
25:4 wo, vaHemani, vanakomana vaHemani: Bhukia, Matania, vaUzieri, Shebhueri, naJerimoti, Hanania, Hanani, Eriati, Giddlti, uye naRomamitiezeri, uye Joshibhekasha, Nallothi, Hotiri, naMahazioti;.
25:5 Vose ava vaiva vanakomana vaHemani, muoni wamambo pamashoko aMwari, kuti kusimudza runyanga. Uye Mwari akapa Hemani navakunda vatatu gumi navana uye.
25:6 All izvi, pasi ruoko baba vavo, akaparadzirwa kuti nziyo mutemberi yaJehovha, vanamakandira, nemitengerangwa, nembira, muushumiri reimba yaJehovha parutivi pamambo, zvakananga, Asafi, naJedhutuni, naHemani.
25:7 Zvino uwandu izvi, nehama dzavo, vairayiridza ari rwiyo raShe, zvose vadzidzisi, vakasvika mazana maviri namakumi masere navasere.
25:8 Uye vakakanda mijenya avo majana, Mukuru zvakafanana ne mudiki, vakadzidza pamwechete kudzidza.
25:9 Zvino mujenya wokutanga akaenda kuna Joseph, akanga vaAsafi; wechipiri akaenda kuna Gedharia, kuti iye navanakomana vake nehama dzake, gumi nembiri.
25:10 Wechitatu akaenda Zakuri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:11 Wechina akaenda Iziri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:12 Wechishanu akaenda Netania, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:13 The wechitanhatu akaenda Bhukia, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:14 Wechinomwe akaenda Jesharera, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:15 Worusere akaenda Jeshaya, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:16 Wepfumbamwe akaenda Matania, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:17 Wegumi akaenda Shimei, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:18 Wegumi akaenda Azareri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:19 Wegumi akaenda Hashabhia, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:20 Nematatu akaenda Shubhaeri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:21 Namana vakaenda Matitia, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:22 Nemishanu akaenda Jeremoti, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:23 Navatanhatu akaenda Hanania, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:24 Nemanomwe akaenda Joshibhekasha, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:25 The nemisere akaenda Hanani, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:26 The nemipfumbamwe akaenda Maroti, kuti vanakomana vake nehama dzake, gumi nembiri.
25:27 Wamakumi maviri akaenda Eriati, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:28 The maviri pakutanga vakaenda Hotiri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:29 The maviri wechipiri akaenda Gidhariti, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:30 The maviri namatatu akaenda Mahazioti, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
25:31 The maviri namana vakaenda naRomamitiezeri, kuti vanakomana vake nehama, gumi nembiri.
26:1 Zvino mapoka vemikova vakanga, kubva vaKora: Mesheremia, mwanakomana waKore, vavanakomana vaAsafi.
26:2 Vanakomana waMesheremia: Zekariya wedangwe, Wechipiri Jedhieri, Zebhadhia wechitatu, Wechina Jatinieri,
26:3 Wechishanu Erami, Jehohanani wechitanhatu, Eriehoenai wechinomwe.
26:4 Ipapo vanakomana va Obhedhi-Edhomu: Shemaya wedangwe, Wechipiri Jehozabhadhi, Joa wechitatu, Sachar wechina, Weshanu Netaneri,
26:5 Amieri wechitanhatu, Isakari wechinomwe, Peullethai worusere. Nokuti Jehovha akanga amuropafadza.
26:6 Zvino mwanakomana wake Shemaya, akaberekerwa vanakomana, Vatongi dzavo. Nekuti vaiva varume vakasimba kwazvo.
26:7 Vanakomana vaShemaya vakanga Otini, naRefaeri, Obhedhi, Erizabhadhi nehama dzake, simba chaizvo varume, uyewo Erihu naErizhabhadhi.
26:8 Vose ava vaibva kuvanakomana-Edhomu: ivo navanakomana vavo, navanin'ina, zvakakodzera chaizvo ushumiri, makumi matanhatu navaviri vaObhedhi-Edhomu kubva.
26:9 Paivawo vanakomana waMesheremia nehama dzavo, akasimba chaizvo varume, gumi nesere.
26:10 ikozvino, kubva Hosa, ndiko, kuvanakomana vaMerari: Shimiri mutungamiri, nokuti akanga asina mwanakomana wedangwe, uye saka, nekuti izvi, vakanga vagadzwa baba vake ave mutungamiri,
26:11 Wechipiri Hirikia, Wechitatu Tebharia, Wechina Zekariya. All izvi, vanakomana nehama naHosa, vaiva gumi nenhatu.
26:12 Ava akaparadzirwa sezvo vemikova, saka kuti vatungamiri nembiru, uyewo hama dzavo, vaishumira nguva muimba yaJehovha.
26:13 Ipapo vakakanda mijenya zvakafanana, nokuti zvose vaduku nevakuru, nemhuri dzavo, pamusoro mumwe nomumwe pamasuwo.
26:14 Mugove kumabvazuva vakawira kuna Sheremia. Asi mwanakomana wake Zekariya, akachenjera kwazvo uye vakadzidza murume, kuchamhembe chikamu rwaiwanikwa nemijenya.
26:15 Zvirokwazvo, Obhedhi-Edhomu navanakomana vake vakawana kuti zasi, ari chikamu imba apo dare revakuru raiva.
26:16 WaShupimi naHosa akawana kuti kumavirazuva, padivi pagedhi kuti inoenda nenzira yaikwira, mumwe mumhanyi kurutivi rumwe.
26:17 Zvirokwazvo, kumabvazuva kwaiva nevaRevhi vatanhatu vakanga, uye kurutivi rwokumusoro kwakanga vana pazuva, uye ipapo kurutivi rwezasi saizvozvo kwakanga mana nerimwe zuva. Uye apo dare rakanga, paiva zviviri zviviri.
26:18 wo, ari mumasero vemikova kumavirazuva, kwaiva zvina munzira, uye vaviri panguva muchitokisi ose.
26:19 Ndiyo migove yavatariri vemikova yevanakomana vaKohati uye vaMerari.
26:20 Zvino Ahija aitarira zvivigiro zvefuma yeimba yaMwari, nemidziyo mitsvene.
26:21 Vanakomana vaRadhani, Vanakomana vaGerishoni: kubva vaRadhani, vatungamiriri vemhuri Radhani vaGerishoni: Jehieri.
26:22 Vanakomana vaJehieri: Zetami, naJoeri; hama dzake dzaiva zvefuma yeimba yaJehovha,
26:23 pamwe pavaAmirami, uye navaHebhuroni, uye yavaHebhuroni, uye navaUzieri.
26:24 ikozvino, Shebhueri, mwanakomana waGerishomi, mwanakomana waMozisi, akanga ari wokutanga panzvimbo zvefuma,
26:25 pamwe nehama dzake, Eliezer, uye mwanakomana wake Rehabhia, uye mwanakomana wake Jeshaya, uye mwanakomana wake Jehoramu, uye mwanakomana wake Zikiri, uye mwanakomana wake Sheromoti.
26:26 Chete Sheromoti uye nehama dzake dzakanga zvefuma zvitsvene, iyo namambo Dhavhidhi akatsaurirawo, nevatungamiriri vemhuri, uye tribunes, uye vezana, uye vehondo.
26:27 Zvinhu izvi zvakanga kubva hondo uye nezvakanga zvatapwa nezvehondo, zvavakanga vatsvene nokuda kugadzira uye kwaakaita temberi yaJehovha.
26:28 Zvino zvose izvi vakanga vatsveneswa Samuel, muoni, uye Sauro, mwanakomana waKishi, uye Abhineri, mwanakomana waNeri, uye Joabhu, mwanakomana waZeruya. Vose vakanga vatsvene ava pasi noruoko Sheromoti nehama dzake.
26:29 Asi zvechokwadi, Kanania navanakomana vake vaibata Vavalzhari, nokuti kunze kwemabasa pamusoro paIsiraeri, kuti vadzidzise uye kutongwa.
26:30 Zvino kubva pavaHebhuroni, Hashabhia navanin'ina vake, chiuru varume vakasimba kwazvo mazana manomwe, vaiva vatariri vaIsraeri mhiri kwaJodhani nechokumavirira, ose mabasa aIshe, uye muushumiri mambo.
26:31 Jeria Zvino mutungamiri yavaHebhuroni yakanga, nemhuri dzavo uye nokuhama. Pagore ramakumi mana rokubata ushe kwaDhavhidhi, vakaverengwa, uye vakawana varume vakasimba kwazvo Jazeri reGiriyadhi.
26:32 Uye hama dzake vakura pazera vakasvika zviuru zviviri namazana manomwe vakuru vemhuri. Ipapo mambo Dhavhidhi akavaisa mutariri wavaRubheni, navaGadhi, uye imwe hafu yorudzi rwaManase, mune zvose hushumiri Mwari uye mambo.
27:1 Zvino vanakomana vaIsraeri, maererano nokuwanda, vakuru vemhuri, ari tribunes, uye vezana, uye madzishe, vakanga vachishumira kuna mambo namapoka avo, kupinda uye vachienda mune chimwe nechimwe mwedzi wegore sezvo vaitarisira, vakasvika zviuru makumi maviri nezvina.
27:2 Joshobhiyami, mwanakomana waZabhadhieri, mutariri rokutanga boka mumwedzi wokutanga; uye pasi pake makumi maviri nezvina.
27:3 Aibva vanakomana vaPerezi, uye aiva mutungamiriri nevamwe vatungamiriri vose muchiuto, nomwedzi wokutanga.
27:4 Boka romwedzi wechipiri akanga ari Dodai, womuAhohi; uye pashure pake paiva neimwe, ainzi naMikiroti, uyo akatonga chikamu hondo makumi maviri nezvina.
27:5 wo, mukuru boka rechitatu, mumwedzi wechitatu, akanga ari Bhenaya, mwanakomana waJehoyadha mupristi; paboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:6 Ndiye Bhenaya uya aiva mhare pakati pavana makumi matatu, uye ari pamusoro matatu. Asi mwanakomana wake, Amizabhadhi, aitarisira boka rake.
27:7 wechina, pamwedzi wechina, aiva Asaheri, munin'ina waJoabhu, uye mwanakomana wake naZebhedhia vanomutevera; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:8 The mutungamiri wechishanu, pamwedzi wechishanu, wakange ari Shamhuti, mulzirahi; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:9 The wechitanhatu, pamwedzi wetanhatu, aiva Ira, mwanakomana waIkeshi, mumwe muTekoite; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:10 The wechinomwe, pamwedzi wechinomwe, aiva Herezi, mumwe muPeroni kuvanakomana vaEfuremu; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:11 The worusere, pamwedzi worusere, akanga ari Shebhekai, mumwe muHushati kubva ndiri yavaZera; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:12 The wepfumbamwe, pamwedzi wepfumbamwe, akanga ari Abhiezeri, imwe muAnatoti kuvanakomana vaBhenjamini; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:13 The wegumi, pamwedzi wegumi, aiva Maharai, uye akanga muNetofati kubva ndiri yavaZera; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:14 The wegumi, pamwedzi wegumi nomumwe, akanga ari Bhenaya, muPiratoni kuvanakomana vaEfuremu; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:15 The nemiviri, pamwedzi wegumi nemiviri, akanga ari Heridhai, muNetofati kubva ndiri waOtinieri; uye boka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.
27:16 izvi Zvino vaya vaiva vokutanga pamusoro pamarudzi aIsraeri vakanga: pamusoro vaRubheni, Eliezer, mwanakomana waZikiri, aiva mutongi; pamusoro pavaSimioni, Shefatia, mwanakomana waMaaka, aiva mutongi;
27:17 pamusoro pavaRevhi, Hashabhia, mwanakomana waKemueri; pamusoro wokwaAroni, Zadhoki;
27:18 pamusoro paJudha, Elihu, munin'ina waDhavhidhi; wokwalsakari, Omri, mwanakomana waMikaeri;
27:19 pamusoro dzaZebhuruni, naIshimaya, mwanakomana Obadiah; pamusoro vaNafutari, naJeremoti, mwanakomana waAzirieri;
27:20 pamusoro pavanakomana vaEfuremu, Hoshea, mwanakomana waAzazia; pamusoro mumwe hafu yorudzi rwaManase, Joel, mwanakomana waPedhaya;
27:21 uye pamusoro mumwe hafu yorudzi rwaManase paGiriyadhi, izvozvo, mwanakomana waZekariya; ipapo pamusoro Benjamin, Jasieri, mwanakomana Abhineri;
27:22 asi zvirokwazvo, naAzareri, mwanakomana waJerohami, aitarisira Dan. Ndivo vakuru vevanakomana vaIsraeri.
27:23 Asi Dhavhidhi akanga asingadi kuvaverenga kubva pamakore makumi maviri uye pasi. Nokuti Jehovha akanga ati vaizowanda Israeri senyeredzi dzokudenga.
27:24 Joabhu, mwanakomana waZeruya, akatanga nhamba, asi haana kupedza. Nokuti nokuda kwaizvozvi, kutsamwa dzakanga dzatumwa Israeri. Uye saka nhamba yevaya vakanga varangarirwa haana ukama mubhuku renhoroondo dzegore namambo David.
27:25 Zvino pamusoro mumatura wamambo wakanga Azimavheti, mwanakomana waAdhieri. asi Jonatani, mwanakomana waUziya, aitarisira mumatura avo vakanga vari mumaguta, nemisha, uye shongwe.
27:26 Uye pamusoro farmlands uye varimi, vaya vaishanda pasi, akanga Ezri, mwanakomana waKerubhi.
27:27 Uye pamusoro kuvarimi yemizambiringa akanga Shimei, mumwe muRamati; ipapo pamusoro wedzimba dzewaini, akanga waZabhedhi, ane Aphonite.
27:28 Zvino pamusoro yemiorivhi uye muonde yemiorivhi, dzaiva mumapani, akanga Bhaari-Hanani, mumwe Gederite; mutariri wedzimba dzamafuta akanga ari Joashi.
27:29 Zvino mutariri wamapoka vakanga achifudzira muna Sharon, Shitrai, mumwe muSharoni, yaiva pakutanga; uye pamusoro nzombe mumipata, paiva waShafati, mwanakomana Adlai.
27:30 Zvirokwazvo, pamusoro Makamera akanga Obil, ane kuvaIshmaeri; uye mutariri wembongoro akanga ari Jedheiya, mumwe muMeronoti.
27:31 Uye pamusoro gwai rakanga Jazizi, mumwe Hagarene. Vose ava vaiva vatungamiriri pamusoro fuma yamambo David.
27:32 zvino Jonatani, babamunini David, aiva gurukota, munhu akangwara uye nenyanzvi murume; iye naJehieri, mwanakomana waHakimoni, navanakomana vamambo.
27:33 Zvino Ahitoferi aiva gurukota ramambo; uye Hushai, muAriki, aiva shamwari yamambo.
27:34 Shure Ahitoferi Jehoyadha, mwanakomana waBhenaya, Abhiatari. Asi mutungamiri wehondo yamambo yakanga Joabhu.
28:1 Uye saka Dhavhidhi akaunganidza zvose veIsraeri, vatongi vamarudzi, uye avo mutariri makambani, vakanga vachishumira kuna mambo, uye zvakare tribunes uye vezana, uye avo mutariri nefuma yamambo, uye vanakomana vake, pamwechete navaranda uye simba uye avo vagara nebasa vari muchiuto, paJerusarema.
28:2 Zvino mambo wakati asimuka amire, akati: "Nditeererei, hama dzangu, navanhu vangu. Ndaifunga kuti ndaizova kuvaka imba, umo areka yesungano yaJehovha, nechitsiko chaMwari wedu, kuti vazorore. Uye saka yandaigadzira zvose nokuda kwayo chivakwa.
28:3 Asi Mwari akati kwandiri: 'Iwe haufaniri kuvakira zita rangu imba, nekuti iwe uri munhu wokurwa, wakateura ropa. '
28:4 Zvino Ishe Mwari waIsraeri akandisarudza, kubva yose yeimba yababa vangu, saka ini aizova mambo waIsraeri nokusingaperi. Nokuti vaJudha akasarudza vatungamiri; zvino kubva paimba yaJudha akatsaura imba yababa vangu; uye kubva kuvanakomana vababa vangu, zvakafadza naye kwandiri kusarudza mambo vaIsiraeri vose.
28:5 Zvadaro zvakare, pakati pavanakomana vangu (nokuti Jehovha akandipa vanakomana vazhinji) akasarudza Soromoni mwanakomana wangu, kuitira kuti agare pachigaro choushe yaJehovha, pamusoro paIsraeri.
28:6 Akati kwandiri: 'Soromoni mwanakomana wako ndiye uchavaka imba yangu nevazhe dzangu. Nokuti ndakamutsaura kuti ave neni semwanakomana, uye ini ndichava naye sababa.
28:7 Uye ndichaita kuti vakasimba hwake, kusvikira pakusingaperi, kana iye achava dzinotsungirira kuita mirayiro yangu uye nokutonga, sezvo neniwo nhasi. '
28:8 Naizvozvo ikozvino, pamberi peungano yose yaIsraeri, munzeve Mwari wedu, chengetai nokutsvaka mirairo yose yaJehovha Mwari wedu, kuti nyika yakanaka ive yenyu, uye anogona bequeath kuti vanakomana vako vanokutevera, kunyange nokusingaperi.
28:9 Zvino iwe, mwanakomana wangu Soromoni, ziva Mwari wababa vako, uye umushumire nomwoyo wakakwana uye chido. Nokuti Jehovha anoongorora mwoyo yose, uye anonzwisisa ndangariro mupfungwa zvose. Kana muchitsvaka iye, uchaona iye. Asi kana mukamusiya, achakurasa parutivi nokusingaperi.
28:10 Naizvozvo ikozvino, sezvo Ishe akakutsaurai, kuitira kuti imba tsvene, kuva zvakasimbisa uye kuita izvozvo. "
28:11 Ipapo Dhavhidhi akapa Soromoni mwanakomana rondedzero pabiravira, uye temberi, uye mumatura, uye yokumusoro pauriri, uye omukatikati dzimba, uye imba mudzikinuri,
28:12 uye zvechokwadi zvose matare kuti akanga aronga, uye dzokunze namakamuri kunhivi dzose, neyezvivigiro zvefuma yeimba yaJehovha, uye nokuda zvefuma zvitsvene,
28:13 uye nokuda mapoka avapristi navaRevhi: pamusoro zvose mabasa eimba yaJehovha uye zvose zvinhu muushumiri temberi yaJehovha.
28:14 Paiva nendarama maererano nokurema kwayo ose emidziyo ushumiri, uye sirivha kurema kuti kusiyana midziyo uye midziyo.
28:15 Zvadaro zvakare, akagova nendarama zvemwenje nemwenje yazvo, maererano nechiyero nerimwe zvemwenje nemwenje yazvo. Saizvozvowo wo, akagova sirivha maererano nokurema kwezvigadziko zvemarambi zvesirivha nemarambi adzo, maererano kusiyana nechiyero.
28:16 wo, akapa goridhe yetafura kuvapo, maererano kusiyana matafura; saizvozvo wo, akapa sirivha mamwe yematafura esirivha.
28:17 wo, Iye akagovera kubva ndarama chaiyoiyo nokuda zvikorekedzo duku uye nendiro censors, uyewo nokuda duku shumba endarama, maererano chairo nechiyero uremu, nokuti shumba pashure shumba. Saizvozvowo zvakare, nokuti shumba esirivha, Akaisa parutivi yakasiyana kurema sirivha.
28:18 ndokubva, nokuti atari pamusoro iyo rusenzi chakatsva, akapa ndarama chaiyoiyo. Uye kubva chete akaita mufananidzo wengoro makerubhi, pamwe yose mapapiro, riri veiling areka yesungano yaJehovha.
28:19 "Izvi zvose," akati, "Rakasvika kwandiri zvakanyorwa noruoko rwaIshe, saka kuti ndinoda kunzwisisa zvose mabasa muenzaniso. "
28:20 Dhavhidhi akati kuna Soromoni mwanakomana wake: "Unoita manfully, uye kusimbiswa, uye muuite. Haufaniri kutya, uye haufaniri kuvhunduswa. Nokuti Jehovha Mwari wangu achava nemi, uye haazoregi iwe kure, uyewo haazosiyi iwe, kusvikira iwe vakakwanisa basa yose ushumiri imba yaJehovha.
28:21 tarirai, mapoka avapristi navaRevhi, nekuti mumwe ushumiri yeimba yaJehovha, vakamira pamberi pako. Uye vave vakagadzirira, uye saka vanoziva, vose vatungamiri uye vanhu, sei kuti tiite zvenyu zvose. "
29:1 Mambo Dhavhidhi akataura neungano yose: "Mwanakomana wangu Soromoni, asarudza Mwari mumwe, ichiri mukomana nyoro. Asi basa iguru, muve ugaro ari kugadzirira, kwete munhu, asi nokuti Mwari.
29:2 Zvino kugona kwangu, Ndagadzira mari imba yaMwari wangu: goridhe zvinhu zvendarama, uye sirivha avo esirivha, nendarira avo zvendarira, simbi avo esimbi, uye matanda avo namatanda, uye mabwe eonikisi, uye matombo vakaita earabhasta, namabwe mavara akasiyana siyana, uye mhando ose nematombo anokosha, uye machena kubva Paros zvakawanda kwazvo.
29:3 Uye kuwedzera izvi kuti ndikabayira mumba yaMwari wangu, ndinopa, nedzangu zvinhu, goridhe nesirivha temberi yaMwari wangu, tisingabatanidzi zvinhu yandakaigadzirira tsvene rutumba:
29:4 matarenda zviuru zvitatu endarama, kubva ndarama yeOfiri, uye matarenda zviuru zvinomwe zvikuru-akanatswa esirivha, nokuti gilding kwemasvingo temberi;
29:5 nendarama chero pane kudiwa nendarama, nesirivha chero pane chikonzero sirivha, nokuti mabasa kuti kuitwa nemaoko nyanzvi dzokugadzira. Uye kana munhu akasununguka inopa, ngaanzwe kuzadza ruoko rwake nhasi, uye kuvigira chero yaanoda Ishe. "
29:6 Uye saka vakuru vemhuri, uye vakuru vamarudzi alsiraeri, uyewo tribunes uye vezana uye nevatariri vamambo pfuma, akavimbisa
29:7 uye akapa, nokuti mabasa eimba yaJehovha, matarenda zviuru zvishanu uye nezvidimbu zviuru gumi endarama, matarenda zviuru gumi esirivha, uye zviuru gumi matarenda zvendarira, uye matarenda ane zviuru zvine zana dzesimbi.
29:8 Uye ani naani akawana matombo anokosha pakati zvavo akazvipa muzvivigiro zveimba yaJehovha, noruoko naJehieri muGerishoni.
29:9 Ipapo vanhu vakafara, sezvo vakanga vachivimbisa zvavo chichimiririra pfupiro nokuzvidira. Nokuti vakanga kupa izvi kuna Jehovha nomwoyo wavo wose. Mambo Dhavhidhi akafara nomufaro mukuru.
29:10 Uye akaropafadza Ishe pamberi yose pechaunga, uye akati: "Makaropafadzwa imi, O Ishe Mwari waIsraeri, Baba vedu kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi.
29:11 Yours, O Ishe, ndiye ukuru nesimba nokubwinya, uyewo kukunda; uye kuti imi kurumbidza. Nokuti zvinhu zvose zviri kudenga nepanyika ndezvenyu. Umambo ndohwenyu, O Ishe, uye imi muri pamusoro vatongi vose.
29:12 Wenyu upfumi, uye ndohwenyu nokubwinya. Une nesimba pamusoro zvose. In ruoko rwenyu kunaka uye simba. In ruoko rwenyu ndirwo ukuru uye simba pamusoro zvose.
29:13 Naizvozvo ikozvino, tikapupura kwamuri, Mwari wedu, uye tinorumbidza zita renyu yakakurumbira.
29:14 Ndini ani, uye navanhu vangu chinyiko, kuti tinofanira kukwanisa kuvimbisa zvose izvi? All ndeyako. Naizvozvo zvinhu isu kubva pamaoko enyu, isu ndakupa.
29:15 Nokuti isu tiri vatorwa uye vatsva pamberi penyu, sezvo madzibaba edu ose akanga. mazuva edu panyika akafanana nomumvuri, uye hapana kunonoka.
29:16 O Ishe Mwari wedu, izvi zvose zvizhinji, zvatakakutadzirai kugadzirira kuitira kuti imba anogona ichavakirwa zita renyu dzvene, zvinobva paruoko rwenyu, uye zvinhu zvose ndezvenyu.
29:17 Ndinoziva, Mwari wangu, kuti iwe vaedze mwoyo, uye kuti imi kusava namano. saka, ari nyore mwoyo wangu, Ndakakunyimawo vakapa zvose izvi nomufaro. Uye ndakaona, pamwe zvikuru nomufaro, vanhu venyu, uyo akawanikwa pano, kupa mipiro yavo kwamuri.
29:18 O Ishe, Mwari wamadzibaba edu Abrahamu, Isaka naIsraeri, tichengetedze nokusingaperi chido ichi nomoyo wavo, uye regai chinangwa ichi nokusingaperi, nokuti kunamata kwenyu.
29:19 wo, Ndichapa mwanakomana wangu Soromoni moyo wakarurama, kuti uchengete mirayiro yenyu, zvenyu, uye mhemberero dzenyu, uye kuti iye anogona kuita zvinhu zvose, uye anogona kuvaka temberi, nokuti izvo Ndagadzira mari. "
29:20 Ipapo Dhavhidhi akarayira ungano yose: "Rumbidzai Jehovha Mwari wedu." Zvino ungano yose akaropafadza Ishe, Mwari wamadzibaba avo. Vakakotama, uye akanamata Mwari, tevere ivo nokupfugamira mambo.
29:21 Ivo immolated vakatambudzwa Ishe. Vakabayira zvinopiswa zuva rakatevera: nzombe dzine chiuru chimwe, namakondobwe ane chiuru, chimwe chiuru makwayana, dzavo zvinonwiwa uye tsika dzose, kwazvo kwazvo, vose vaIsraeri.
29:22 Uye vakadya uye vakanwa pazuva pamberi paJehovha, nokufara kukuru. Ivo vakazodza Solomon, mwanakomana waDhavhidhi, kechipiri. Ivo akamuzodza kuna Ishe sezvo mutongi, naZadhoki ave mupristi mukuru.
29:23 Zvino Soromoni akagara pachigaro choushe chaJehovha akava mambo, panzvimbo yababa vake Dhavhidhi, uye zvakafadza vanhu vose. Uye vaIsraeri vose vaimuteerera.
29:24 Uyezve, zvose vatungamiri, uye simba, uye vanakomana vose vamambo Dhavhidhi wakanyengwa noruoko rwavo, uye vakava pasi mambo Soromoni.
29:25 Ipapo Jehovha akakudza Soromoni vaIsiraeri vose. Uye akamupa ushe inobwinya, mumwe mhando akadai hapana aiva pamberi pake, samambo waIsraeri.
29:26 zvino David, mwanakomana waJese, akatonga vaIsiraeri vose.
29:27 Zvino mazuva panguva yaakanga atonga Israeri aiva makore makumi mana. Akatonga kwemakore manomwe muHebhuroni, uye makore makumi matatu namatatu muJerusarema.
29:28 Uye akafa anyatsokura, namazuva mazhinji uye upfumi nokukudzwa. Uye mwanakomana wake Soromoni akatanga kutonga panzvimbo pake.
29:29 Zvino mabasa amambo Dhavhidhi, kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira, zvakanyorwa mubhuku muoni Samuel, uye mubhuku muprofita Natani, uye mubhuku Gadhi muoni,
29:30 pamusoro pokutonga yake yose uye simba, uye zvenguva yakapfuura pasi pake, paIsiraeri uye zvose enyika.